UAngela-ICawe ifuna umthandazo-ukubala ubukumkani
UAngela-ICawe ifuna umthandazo
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Angela on Oktobha 26, 2020:
Ngale njikalanga uye wavela uMama bonke benxibe ezimhlophe. Imiphetho yelokhwe yakhe yayiyeyegolide. Umama wayesongelwe ngengubo enkulu eluhlaza ethe-ethe eyambathisa nentloko. Entloko yayinesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Umama ebesonge izandla ethandaza kwaye ezandleni zakhe kukho irosari ende emhlophe emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya, eyehla iphantse yaya ezinyaweni zakhe. Iinyawo zakhe zazize kwaye zibekwe emhlabeni. Ehlabathini, imifanekiso yeemfazwe kunye nobudlova kunokubonakala. Ihlabathi labonakala lijikeleza ngokukhawuleza, kwaye izigcawu zilandelelana emva komnye. Makadunyiswe uYesu Krestu…
Bantwana abathandekayo, ndiyabulela kuni ukuba namhlanje nibuyele kwihlathi lam elisikelelekileyo ukuba nindamkele kwaye nisabele kweli khwelo lam. Bantwana bam, namhlanje ndilapha kwakhona ukuza kunicela umthandazo: umthandazo kuMmeli kaKristu kunye neCawe yam endiyithandayo. Thandazani, bantwana abancinci, thandazani ukuze ukholo lwenene lungalahleki. U-Yesu wathembisa ukuba amasango esihogo awasokuze ayoyise iBandla laKhe. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ukholo alunakuphulukana kwiindawo ezininzi ukuba azikho kwiindawo ezininzi. Cinga ukuba iileta eziya kwiicawa ezisixhenxe kwiNcwadi yeSityhilelo azisengawo amazwe obuKristu. "Kuyimfuneko ukuba umhlambi omncinci uphila, nokuba incinci kangakanani. ” (UPAPA PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Isalathiso (7), iphe. ix.) Bantwana, ilizwe liyanda ekubanjweni yimikhosi yobubi, kwaye baya besanda abantu abazikhwebulayo kwiCawe, kuba bayabhideka yile nto isasazwa ngokungachanekanga. IsiTaliyane: 'ciò che viene diffuso in modo errato' - inguqulelo yokoqobo 'leyo isasazeka ngendlela engeyiyo'. Inqaku lomguquleli.Bantwana bam, iBandla lifuna umthandazo; Oonyana bam abanyuliweyo [ababingeleli] bafuna ukuxhaswa ngomthandazo. Thandazani, bantwana, kwaye musani ukugweba: umgwebo awungowenu kodwa nguThixo, ongukuphela komgwebi wayo yonke into nabo bonke abantu. Bantwana bam abathandekayo, ndiyaphinda ndiyanicela ukuba nithandaze iRosari eNgcwele yonke imihla, niye ecaweni yonke imihla kwaye niguqe ngamadolo phambi konyana wam, uYesu. Unyana wam uyaphila kwaye uyinyani kwiSigramente Esibusisiweyo seAltare. Yima phambi kwakhe, nqumama uthe cwaka; UThixo wazi umntu ngamnye kwaye uyazi into eniyisweleyo: musa ukuchitha amazwi kodwa mvumele athethe kwaye amphulaphule.
Emva koko uMama wandicela ukuba ndithandaze naye. Emva kokuthandaza ndibanike bonke abo bazincomileyo kwimithandazo yam. Emva koko umama waqalisa:
Bantwana abancinci, ndicela ukuba niqhubeke nokwenza umthandazo weCenacles. Ziqhumise izindlu zakho ngomthandazo; funda ukusikelela kwaye ungaqalekisi.
Ekugqibeleni wasikelela wonke umntu.
Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen.
Ngaphambi kokuthumela umyalezo ongentla, endandingazange ndiwufunde de kube namhlanje, ndiye ndaphefumlelwa ukuba ndibhale ezinye izimvo kuFacebook phezolo, endizibandakanya apha ngezantsi:
Zimbalwa iinkcazo zokuziphatha kukaYesu ezicacile ngolu hlobo: “Musani ukugweba” (Mat 7: 1). Sinako kwaye kufuneka sigwebe amagama aneenjongo, iingxelo, iintshukumo, njl. Kodwa ukugweba intliziyo kunye neenjongo ngomnye umcimbi. AmaKatolika amaninzi azimisele ukwenza izibhengezo malunga neenjongo zababingeleli babo, oobhishophu kunye nopopu. U-Yesu akasayi kusigweba ngezenzo zabo kodwa indlela esizigweba ngayo.
Ewe, uninzi luyakruquka ngabelusi babo, ngakumbi malunga nokudideka okusasazeka kuyo yonke iBandla. Kodwa oku akuthetheleli ukuba singene, kungekuphela nje esonweni, kodwa sibe lingqina elibi kwabanye kwimidiya yoluntu, emsebenzini, njl. Katekisiki weChurc yamaKatolikah inobulumko obumnandi esimele ukubulandela ngokuziphatha:
Ukuhlonipha imbeko yabantu kuthintela zonke iindlela zokucinga kunye negama elinokubangela ukwenzakala ngokungekho sikweni. Uba netyala:
- wokugweba ngokungxama, othi, ngokuthe cwaka, acinge ukuba yinyani, ngaphandle kwesiseko esaneleyo, isimilo sokuziphatha sommelwane;
-Ukuphambukisa othi, ngaphandle kwesizathu esivakalayo, atyhile iimpazamo nokusilela kwabantu abangabaziyo;
- ye-calumny ethi, ngamazwi aphambene nenyaniso, onakalise igama labanye kwaye anike ithuba lokugweba okungalunganga malunga nabo.
Ukuthintela ukugweba ngokungxama, wonke umntu kufuneka alumkele ukutolika kude kangangoko iingcinga, amazwi nezenzo zommelwane wakhe ngendlela elungileyo:
Wonke umKristu olungileyo kufuneka akulungele ngakumbi ukunika inkcazo elungileyo kwinkcazo yomnye umntu kunokuba ayigxeke. Kodwa ukuba akakwazi ukwenza njalo, makibuze ukuba omnye uyiqonda njani loo nto. Kwaye ukuba le yokugqibela iyayiqonda kakubi, vumela abangaphambili bamlungise ngothando. Ukuba oko akonelanga, umKristu makazame zonke iindlela ezifanelekileyo zokuzisa omnye kwinkcazo echanekileyo ukuze asindiswe. (CCC, iinombolo. 2477-2478)
U-Yesu wathembisa ukuba amasango esihogo awasokuze ayoyise iBandla laKhe. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ukholo alunakuphulukana kwiindawo ezininzi ukuba azikho kwiindawo ezininzi. Cinga ukuba iileta eziya kwiicawa ezisixhenxe kwiNcwadi yeSityhilelo azisengawo amazwe obuKristu. "Kuyimfuneko ukuba umhlambi omncinci uphila, nokuba incinci kangakanani. ” (UPAPA PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Isalathiso (7), iphe. ix.)
IsiTaliyane: 'ciò che viene diffuso in modo errato' - inguqulelo yokoqobo 'leyo isasazeka ngendlela engeyiyo'. Inqaku lomguquleli.
exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.
← UJennifer -Ulungiso oluKhulu…
Uthando lwethu lokuqala →
Ukufana okuthe ngqo
Iziphumo ezingakumbi ...
Kwimeko apho iBig Tech isivale phantsi, kwaye ungathanda ukuhlala unxibelelana, nceda wongeze nedilesi yakho, engasayi kwabelwana ngayo.
Thatha umva u-Fr. UMichel Rodrigue
Fr. UStefano Gobbi
NguLuz de Maria de Bonilla
Umkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta
Ukukhuselwa ngokwasemzimbeni kunye nokuLungiselela
Ukubuya Kwempembelelo KaSathana
Iintsuku ezintathu zobumnyama
Isilumkiso, ukuRhoxiswa kwakhona, kunye noMmangaliso
Kutheni le nto imboni?
Iidemon kunye nomtyholi
Izitofu, Izibetho kunye neCovid-19
Amatywina asixhenxe eSityhilelo
Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi Ngamana 19, 2022
UGisella -Yenza izibonelelo . . . Ngamana 18, 2022
UPedro-Ungalahli Ithemba Lakho Ngamana 18, 2022
ULuz-Ubuntu Buya Kuwela Ekuphelelweni Lithemba Ngamana 17, 2022
UGisella-Thandazela abantwana bam baseUkraine Ngamana 16, 2022
USimona kunye no-Angela-Amaxesha anzima akulindile Ngamana 16, 2022
Fr. UMichel Rodrigue
Umchasi-Kristu Uwexuko ubuKatolika Uqeqesho icawa kobuthixo ukuvuma kudideka ukuguqulwa sibindi I-Covid-19 ukuphoxeka ukwahlukana Isahluko soxolo Umthendeleko ukholo Ukoyika Isikhanyiso seSazela Intliziyo Enganyanzelekanga UYesu lungisa uthando uMariya Inceba Umama bhubhane Uxolo Ntshutshiso papa mthandazo ababingeleli isiprofetho zokuhlanjululwa guquka irosari Rhashiya iisakramente zilingo Imbandezelo Ukuphumelela themba inyaniso lokugonya Imfazwe isilumkiso
Kutheni Simona noAngela?
Imibono yeNenekazi lethu leZaro
Izibhengezo zase Marian e Zaro di Ischia (isiqithi esikufutshane nase Naples e-Itali) ziyaqhubeka ukusukela ngo-1994. unika isikhokelo ngokomoya kubo, wayengomnye weqela lababoni ngexesha lesigaba sokuqala seembonakalo, ngaphambi kokuba abe ngumbingeleli. (NguDon Ciro, ubuncinci kude kube kutshanje, oya kufunda imiyalezo ebhalwe nguSimona noAngela emva kokuba bevele kwimincili yabo okanye "ukuphumla kuMoya—riposo nello Ghosto").
Imiyalezo evela kwintokazi yethu yase Zaro isenokungaziwa kakuhle kwilizwe elithetha isiNgesi, kodwa kunokwenziwa ityala lokuzinyanga kakuhle ngenxa yezizathu ezininzi. Esokuqala kukuba abasemagunyeni beedayosesi bazifundela ngenkuthalo kwaye ngo-2014 baseka ikhomishini esemthethweni egunyazisiweyo, phakathi kwezinye izinto, ukuqokelela ubungqina bokuphiliswa kunye nezinye iziqhamo ezinxulunyaniswa novavanyo. Iimbono kunye novavanyo lwazo, ke ngoko, ziphantsi kocalucalulo olunzulu, kwaye kulwazi lwethu, akuzange kubekho zityholo zokungahambi kakuhle. UDon Ciro, ngokwakhe, uvakalise ukuba wayengekhe amiselwe nguMiss. UPhilippo Strofaldi, owayelandela u -apparitions ukusukela ngo-1999, owayenonxibelelwano wagweba ii -apparitions nokuba ze-diabolic okanye isiphumo sokugula ngengqondo. Into yesithathu ekuthandeni ukuthatha ii -apparo ze-Zaro / imiyalezo ngobunono bubungqina obucacileyo bokuba ngo-1995, ababukeli babenombono obonakalayo (owapapashwa kwiphephandaba. Ixeshayatshatyalaliswa ngo-2001 iTwin Towers * eNew York. (Yile nto eyatsala umdla woonondaba besizwe kuZaro). Ngokubhekisele kwimixholo yemixholo yemiyalezo, ** kukho ukuhlangana okumangalisayo phakathi kwabo kunye neminye imithombo enzulu, kungekho zimpazamo zakwalizwi.
Idokhumenti yevidiyo (yaseNtaliyane) ebandakanya ukugcinwa kwembonakalo yonyaka ye-1995 yababonisi (phakathi kwabo uCiro Vespoli):
UDon Ciro Vespoli wayengomnye weqela labadlali bokwenene xa wayekwishumi elivisayo, kamva waba ngumfundisi. Akasahlali kufutshane neZaro kodwa ufumana kwaye uhambisa imiyalezo.
Imfihlakalo yasePoland, u-Alicja Lenczewska, wazalelwa eWarsaw ngo-1934 kwaye wasweleka ngo-2012, ubomi bakhe bobuchwephesha buchithwa ikakhulu njengomfundisi-ntsapho kunye nomlawuli onxulumene nesikolo kwisixeko esikumantla ntshona eSzczecin. Kunye nomntakwabo, waqala ukuthatha inxaxheba kwiintlanganiso zoVuselelo lweCathism Charismatic ngo-1984 emva kokubhubha kukanina. Ngo-Matshi 8, 1985, ubomi buka-Alicja batshintsha kakhulu xa wadibana noYesu emi phambi kwakhe emva kokufumana uMthendeleko oNgcwele. Kwakungalo mhla aqala ukurekhoda iingxoxo zakhe eziyimfihlakalo. Ukuthatha umhlala-phantsi ngo-1987, waba lilungu loSapho lwentliziyo yoThando lwaBabethelelweyo, wenza izifungo zakhe zokuqala ngo-1988 kunye nezifungo ezingapheliyo ngo-2005. . Ngo-2010, unxibelelwano lwakhe oluyimfihlakalo lwafikelela kwisigqibo, kwiminyaka emibini ngaphambi kokubulawa kwakhe ngumhlaza eSt John's Hospice, eSzczecin, ngoJanuwari 5, 2012.
Ukubalekela ngaphezulu kwamaphepha ayi-1000 aprintiweyo, iphephancwadi lika-Alicja elinemibhalo emibini (iTestimony (1985-1989) kunye ne-Exhortations (1989-2010) yapapashwa emva kokufa, ngenxa yemizamo ka-Archbishop waseSzczecin, Andrzej Dzięga, owaseka ikhomishini yobufundisi Ukuvavanywa kwemibhalo yakhe, eyanikwa i-Imprimatur nguBhishophu uHenryk Wejman. Ukusukela ukuvela kwabo ngo-2015, baye bathengisa kakhulu phakathi kwamaKatolika asePoland kwaye bahlala becatshulwa esidlangalaleni ngabefundisi ngenxa yokungena kwabo kubomi bokomoya kwaye izityhilelo zabo malunga nelizwe langoku.
Indoda yaseMntla Melika, enqwenela ukungazichazi igama, esiza kuthi nguWalter, yayinomsindo omkhulu, inekratshi, kwaye yayihlekisa ngenkolo yamaKatolika, de yafikelela kwinqanaba lokukrazula iirosari zikanina ezandleni zakhe zokuthandaza nokuzichitha kuwo wonke umgangatho, wadlula kuguquko olunzulu.
Ngenye imini, umhlobo wakhe kunye nomsebenzi, u-Aaron, owayesandula ukuguqulwa eMedjugorje, wanika uWalter incwadi yemiyalezo kaMary's Medjugorje. Ukuthabatha nabo ukuya kwiCathedral yeSigramente Ebusisiweyo ngexesha lesidlo sasemini emsebenzini wakhe njengomthengisi wezindlu, wabadla kwaye ngokukhawuleza waba yindoda eyahlukileyo.
Kungekudala emva koko, wabhengeza kuAron, "Kukho isigqibo endisithathayo ebomini bam. Ndidinga ukuthatha isigqibo sokuba ndibunikele na ubomi bam kuMama kaThixo. ”
“Kulungile, Walter,” uphendule watsho u-Aaron, “kodwa ngo-9 kusasa, kwaye sinomsebenzi ekufuneka siwenzile. Singathetha kamva. ”
"Hayi, kufuneka ndenze eso sigqibo ngoku," watsho uWalter.
Emva kweyure, wabuya wangena e-ofisini ka-Aaron encumile wathi, "Ndiyenzile!"
“Ndinikele ubomi bam kuMama wethu.”
Lwaqala ke ukonwabisa kunye noThixo kunye neNkosazana yethu uWalter awayengenakuphupha ngayo. Ngelixa uWalter wayeqhuba egoduka evela emsebenzini ngenye imini, uvakalelo olunzulu esifubeni sakhe, njengesitshisa esibuhlungu esingakhange sibuhlungu, ngequbuliso samoyisa. Yayiyimvakalelo yolonwabo eyomelele kangangokuba wayezibuza ukuba angaba nesifo sentliziyo na, kwaye ke wayirhola indlela kahulu. Emva koko weva ilizwi ekholelwa ukuba nguThixo uBawo: “Umama osikelelweyo ukhethe wena ukuba usetyenziswe njengesixhobo sikaThixo. Iya kukuzisela izilingo ezinkulu kunye nokubandezeleka okukhulu. Ingaba ukulungele ukuyamkela le nto? ” UWalter wayengazi ukuba ithetha ukuthini le nto- kuphela kokuba wayecelwa ukuba asetyenziswe njengesixhobo sikaThixo. UWalter wavuma.
Kungekudala emva koko, uMama wethu waqala ukuthetha naye, ngakumbi emva kokufumana uMthendeleko oNgcwele. UWalter wayelive ilizwi lakhe ngokusebenzisa izinto zangaphakathi-ngamagama acace kuye njengelakhe-kwaye waqala wamkhokela, wammisa, kwaye wamfundisa. Kungekudala uMama wethu waqala ukuthetha ngaye kwiqela lomthandazo elalikhula kwaye lakhula ngeveki.
Ngoku le miyalezo ikhuthaza, imilo, icelomngeni kwaye yomeleza intsalela ethembekileyo yala maxesha, amaxesha okugqibela, iyafumaneka kwihlabathi. Ngokudibeneyo, ziyafumaneka encwadini: Lowo Ubonisa iNdlela: Imiyalezo yaseZulwini yeXesha lethu eliXhalabisayo kwaye bafundisiswe kakuhle ngabefundisi abaliqela kwaye bafumaneka bengenazo zonke iimpazamo zeemfundiso kwaye bamkelwe ngentliziyo epheleleyo ngu-Archbishop Emeritus Ramón C. Argüelles waseLipa.
Kutheni uEduardo Ferriera?
U-Eduardo Ferreira owazalwa ngo-1972 e-Itajai kwiphondo laseSanta Catarina eBrazil, wafumana umfanekiso weNkosikazi yethu yase-Aparecida kwintendelezo yendlu yosapho ngoJanuwari 6, 1983. Ngo-Okthobha 12, 1987, kwiintsuku ezine emva komthendeleko wakhe wokuqala, U-Eduardo kunye nodadewabo uEliete babethandaza phambi kwalo mfanekiso xa uEduardo wabona ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuvela kuwo kwaye kukhanyise igumbi. Nge-12 kaFebruwari, 1988 wayenombono wakhe wokuqala weNtombi Enyulu, embona ngokungathi ukwiglasi egcwele i-rose, ephethe inyoka ngonyawo. Izibhengezo zenzeka phantse yonke imihla kude kube nguJanuwari 1, 1996, kwiinyanga ezimbini emva komyalezo wokuqala ovela kuYesu esibhedlele apho uEduardo wayesebenza njengomongikazi.
Ukuqala ngoFebruwari 1997 kwaye kusaqhubeka, ukubonakala ku-Eduardo Ferreira bekuqhubeka rhoqo nge-12 yenyanga nganye kwaye ngamanye amaxesha kweminye imihla. Ngexesha elifanayo lokufumana ibala ngoFebruwari 2, 1996, uEduardo wadibana nombono wesibini, uAlceu Martins Paz Junior (owazalwa ngo-1977), onamava ayimfihlakalo aquka ukubona iNtombikazi nge-9 kaJulayi 1996. La makhwenkwe mabini waqala ukushumayela kunye kodwa wajamelana nenkcaso enkulu, uEduardo efumana izoyikiso zokubulawa, kubandakanya namalungu osapho lwakhe. Emva kwexesha apho wayengenakhaya, u-Eduardo ekugqibeleni wazinza eSão José dos Pinhais kwiphondo laseParaná e1997, apho ahlala khona, nalapho kuye kwakhiwa indawo engcwele, njengoko kunokubonwa kwiividiyo zembonakalo.
UMary ubonakala kwezi zibuko njengo "Rosa Mystica", isihloko awabonakala phantsi kwakhe ukuba ngumongikazi uPierina Gilli eMontichiari-Fontanelle (1947), umsitho apho imiboniso yaseBrazil ku-Eduardo noJunior bebhekisa kuyo kaninzi. Imibonakalo iphawulwe linani elikhulu leziganeko ezingachazwanga ezifana nezi zibonwa kwezinye iisayithi ezifanayo: ukukhutshwa kwegazi kumfanekiso weNtombikazi (njengaseCivitavecchia okanye iTrevignano Romano), "umdaniso welanga" (njengaseFatima okanye iMedjugorje), umfanekiso kaMariya ngokungaqondakaliyo “uprintwe” kwizipetali (njengaseLipa kwiiPhilippines ngo-1948)… Kwimiyalezo, sikwafumana izingqinisiso kwiimpawu ezininzi zaseMarian zexesha elidlulileyo. Ezinye zazo ziye zagxothwa yiCawe (Montichiari, Ghiaie di Bonate, Biding, Kerizinen…), kodwa zatsala umdla okhulayo kwicala labaphandi abanzulu abanomdla wokumisela inyani yezembali nokubuyisela kwisimo sobugqi abo bangathi bagwetywe ngokungafanelekanga.
Imixholo ephambili yemiyalezo eya ku-Eduardo Ferreira (engaphezulu kwama-8000 ukuza kuthi ga ngoku) iyahlangana ngesininzi seminye imithombo yesiprofeto esinzulu. Bafumene ingqalelo enkulu kwiinyanga nje ezidlulileyo ngenxa yomyalezo omde ofunyenwe ngumboni eHeede, eJamani kwi2015, indawo yokubonakala kubantwana abane ngaphambi nje kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Lo myalezo, ujongwe ngaphezulu kwezigidi ezi-3 amaxesha kwi-YouTube, kubonakala ngathi uxele kwangaphambili imeko yangoku yezempilo.
Kutheni Edson Glauber?
Ngo-1994, izibhengezo zikaYesu, uMama wethu, kunye noSt.Joseph kuEdson Glauber, oneminyaka engamashumi amabini anesibini, kunye nonina, uMaria do Carmo. Ngo-2021, u-Edson wasweleka kwisigulo esifutshane.
Ukubonakaliswa kwaziwa ngokuba yi-Itapiranga, ebizwa ngokuba yidolophu yabo yase-Amazon yaseBrazil. Intombi Enyulu uMariya yazichaza “njengoKumkanikazi weRosari neyoXolo,” kwaye imiyalezo yayihlala igxininisa ukuthandaza iRosari yonke imihla — ngakumbi irosari yosapho, ukucima umabonwakude, ukuya kwi-Confession, kwiNdumiso ye-Ekaristi, isiqinisekiso sokuba ICawe yokwenene yiCawe yabaPostile baseRoma, kwaye "isijeziso soqeqesho" sisondele. Inenekazi lethu labonisa izulu, isihogo kunye nentlambululo-miphefumlo kuEdson, kunye noNyana wakhe, banikezela ngeemfundiso ezahlukeneyo kwiintsapho kuMaria do Carmo.
Ngaphaya koko, iNenekazi lethu licele ngokuthe ngqo ukuhanjiselwa kobuKristu obujolise ngendlela eyahlukileyo kulutsha kunye nokwakhiwa kwendawo elula yokuhambisa abahambi ngeziko, kunye neziko levenkile yesuphu e-Itapiranga yabantwana abasweleyo.
Utata kaEdson, owayenotywala obunogonyamelo oguqukele ngenxa yempembelelo yeapparitions kwakamsinya nje wafunyanwa ngedolo ethandaze kwiRosary ngentseni yentsasa, kwaye uLakhe uMfazi wathi ngesiqwenga esikhulu somhlaba yena noThixo. Ukumkanikazi weRosary wachukumisa ngesandla sakhe amanzi avela kwindawo yeapilanga e-Itapiranga kwaye wacela ukuba aziswe kwabagulayo ukuze baphiliswe. Inani elikhulu lokuphiliswa okungummangaliso kuye kwaxelwa, kwavavanywa ngokuqinisekileyo ngoogqirha, kwaye kwathunyelwa kwi-Apostolic Prefecture ye-Archdiocese yase Itacoatiara. Ubuye wacela ukuba kwakhiwe indawo yokusebenzela.
Ngo-1997, imiyalezo ka-Itapiranga ngamanye amaxesha yagxininisa ukuzinikela kweNtliziyo eNgcwele ka-Joseph, kwaye uYesu wacela ukuba uMhla woNyaka olandelayo ungeniswe kwiCawa:
Ndinqwenela ukuba uLwesithathu wokuqala, emva koMthendeleko weNtliziyo yaM eNgcwele kunye neNtliziyo eNgenasiphelo kaMariya, anikezelwe kuMthendeleko weyona Intliziyo icocekileyo yeSt Joseph.
NgoLwesithathu, nge-11 kaJuni ka-1997, umhla wonyaka walo Mthendeleko uceliweyo, uMama osikelelekileyo wathi oku kulandelayo, esenza ireferensi yoluhlu losapho oluNgcwele olwenzeka eGhiaie de Bonate emantla e-Itali, ngeminyaka yoo-1940- ii -apparations apho ukuzinikela kwiSt. Joseph kwakwandiswa khona:
Bantwana abathandekayo, xa ndandivela eGhiaie di Bonate noYesu kunye no-St. Joseph, ndifuna ukukubonisa ukuba kamva kwihlabathi liphela kufanele ukuba nothando olukhulu kwiNtliziyo eNyulu ye-St. Joseph kunye neNtsapho eNgcwele, kuba uSathana bangahlasela iintsapho kakhulu ngeli xesha lesiphelo, bezitshabalalisa. Kodwa ndibuya kwakhona, ndizisa izimbalasane zikaThixo, iNkosi yethu, ukuba ibanike zonke iintsapho ezifuna ukhuseleko oluNgcwele.
Njengoko kwenzekile kwezinye iiaparisari zaseMarian, ezinjengeFatima neMedjugorje, iNenekazi lethu labhengeza imfihlakalo ka-Edson malunga nolwazelelo lweCawa nolwehlabathi, kunye neziganeko ezimbi zekamva elizayo ukuba ubuntu abuguquki. Okwangoku, kukho iimfihlakalo ezisithoba: ezine eziphathelele eBrazil, zimbini zehlabathi, zimbini zeCawe, enye yeyabo baqhubeka nobomi besono. Inenekazi lethu laxelela uEdson ukuba uzakushiya ebonakalayo kwiNtaba yoMnqamlezo ecaleni kwecawa ese-Itapiranga.
Ngomhla we-4 ku-Okthobha ka-1996, ebonakala phambi komnqamlezo kwintaba ecaleni kwecawa, iNtombi yathi:
“Nyana wam othandekayo, ndinqwenela ukukuxelela ngale mvakwemini kwaye ndixelele bonke abantwana bam ukubaluleka kokuphila imiyalezo. Kwabo bangakholwayo, ndinqwenela ukubaxelela ukuba ngenye imini, apho ikhoyo lo Mnqamlezo, ndiza kunika umqondiso obonakalayo, kwaye bonke bayakukholelwa kubukho bam boomama apha e-Itapiranga, kodwa kuya kuba kudala kakhulu kwabo akaguqulwanga. Uguquko kufuneka lube ngoku! Kuzo zonke iindawo apho sele ndibonakele kwaye ndiqhubeka nokuvela, ndihlala ndiqinisekisa iiapparitions zam ukuze kungabikho mathandabuzo, kwaye apha e-Itapiranga, ukuboniswa kwam kweZulu kuya kungqinwa. Oku kuyakwenzeka xa iinkqubo zam apha eItapiranga zizophela. Bonke baya kubona umqondiso onikiweyo kule Nqamlezo; Bazoguquka ngokungamameli kum, kuba bendihleka kwimiyalezo yam nakwizigidimi zam, kodwa kuyakuba kusemva kwexesha kuba baya kube beyichithile imichaphaza yam. Bakuba bephulukene nexesha lokusindiswa. Thandaza, thandaza, thandaza! ”
UDom Carillo Gritti, uBhishophu we-diocese yase-Itacoatiara, uvumile isigaba se-1994-1998 sembonakalo njenge "yendalo" evela ngoMeyi 31, 2009 kwaye wabeka ilitye lembombo leSanctuary entsha e-Itapiranga ngoMeyi 2, 2010. Imiyalezo ku-Edson Glauber, egcwalisa ngaphezulu kwamaphepha e-2000, ahambelana kakhulu neminye imithombo yesiprofeto ethembekileyo, kwaye enobungqongqo obunamandla bokugqibela, ibe yinto yezifundo ezininzi. Ingcali yeMariologist, uGqirha uMark Miravalle weYunivesithi yaseSteubenville wanikezela incwadi kubo, ebizwa Iintliziyo zoThathu: Ukusetyenziswa kukaYesu, uMarko kunye noJosefu baseAmazon.
Ukusukela ukusweleka kuka-Dom Gritti kwi-2016, bekukho ukungavisisani okwangoku okusombululekileyo phakathi kwedayosisi yase-Itacoatiara kunye noMbutho osekwe ngu-Edson Glauber nosapho lwakhe ukuxhasa ulwakhiwo lweNgcweliso. Umlawuli weDiocese wanxibelelana neBandla leMfundiso yezeNkolo kwaye wafumana ingxelo kwi-2017 yokuba i-CDF ayithathele ingqalelo imimangaliso engaphezulu kwendalo, isikhundla esigcinwe yiArchdiocese yaseManaus. I-CDF, eyayiphantsi kukaKhadinali Gerhard Ludwig Müller ngelo xesha, khange ayikhankanye imboni yesibini, umama kaGlauber, uMaria do Carmo, naye owadibana nokuvunywa nguBhishophu uGritti ongasekhoyo ngoku.
Ngenxa yokuba imibonakalo ayisavunywa ngokusesikweni (kodwa ayigwetywanga ngokusesikweni), inokubuzwa ngokusemthethweni ukuba kutheni sikhethe ukubonisa izinto ezifunyenwe nguEdson Glauber kule webhusayithi. Apha kufanele ukuba, ngelixa imvume kabishophu wangaphambili kufuneka ithathelwe ingqalelo njengokurhoxiswa, ingxelo ye-CDF ayisiyiyo isigwebo esisemthethweni, kwaye uninzi lwabagqabazi luphakamise imibuzo malunga nokuhamba rhoqo kwenkqubo yezenzo zoMlawuli weDiocese . Ukongeza, izenzo zomthetho ezenziwa yi-CDF zithintela kuphela u-1) ukwazisa ngokusesikweni kwemiyalezo ka-Edson, 2) "ukusasazwa ngokubanzi" kwemiyalezo yakhe ngu-Edson ngokwakhe okanye 'Umbutho' wakhe e-Itapiranga, kunye no-3) ukukhuthazwa kwemiyalezo ngaphakathi Ngaphambi kwexesha le-Itacoatiara. Sihlala siyithobela yonke le miyalelo; Kwaye, ukuba imiyalezo yakhe iyagwetywa ngokusesikweni kwixesha elizayo, siya kuyisusa kule webhusayithi.
Nangona kuyinyani ukuba uGqirha Miravalle wayirhoxisa incwadi yakhe emva kokufunda uxwebhu lwe-CDF, kufanelekile ukuba uqaphele ukuba iiwebhusayithi ezininzi kwihlabathi liphela ezinemathiriyeli yesiprofetho eyaziwayo ngokunyaniseka kwabo kwimfundiso yeCawe nangona kunjalo bagqibe kwelokuba baqhubeke nokupapasha iinguqulelo imiyalezo ye Itapiranga. Oku mhlawumbi kuchazwa ngcono kukuba, ngexesha lokuphila kukaDom Carillo Gritti, izibhengezo zase-Itapiranga zonwabela inqanaba elingaqhelekanga lokuvunywa. Ngapha koko, ukungxamiseka komyalezo wemiyalezo kukuba ukumisa ukuhanjiswa kwale nto kude kube sisisombululo kwityala lika-Edson Glauber (elinokuthatha iminyaka eliqela) liza kuba semngciphekweni wokuthula ilizwi lasezulwini ngexesha apho kufuneka silivile.
(1913-1985) Umfazi, uMama, uMystic, kunye noMsunguli weLangatye loLuthando
U-Elizabeth Szántò wayengumlinganiswa waseHungary owazalelwa eBudapest ngonyaka we-1913, owayephila ubomi bobuhlwempu kunye nobunzima. Yayingoyena mntwana mdala kwaye yayinguye yedwa ecaleni kwamawele akhe abathandathu ukuze aphilele ekubeni mdala. Xa wayeneminyaka emihlanu ubudala, utata wakhe wasweleka, kwaye eneminyaka elishumi, uElizabeth wathunyelwa eWillisau, eSwitzerland ukuze aye kuhlala nosapho oluhle. Ubuyele eBudapest okwethutyana eneminyaka elishumi elinanye ukuba abe kunye nokukhathalela umama wakhe owayegula kakhulu kwaye elele ebhedini. Kwinyanga kamva, uElizabhete kwakucetywa ukuba akhwele uloliwe ovela e-Austria ngentsimbi ye-10: 00 kusasa ukuze abuyele kwintsapho yaseSwitzerland eyathatha isigqibo sokumthatha. Wayeyedwa kwaye ngempazamo wafika kwisikhululo ngentsimbi ye-10 pm Isibini esitshatileyo samthatha sabuya naye eBudapest apho wachitha khona ubomi bakhe bonke de wasweleka ngo-1985.
Ukuphila njengenkedama ecaleni kwendlala, uElizabhete wasebenza nzima ukuze aphile. Kabini, wazama ukungena kumabandla enkolo kodwa wala. Izinto zatshintsha ngo-Agasti ka-1929, xa samkelweyo kwikwayala yecawe apho wadibana noKaroly Kindlemann, umhlohli we-chimney-sweeper. Batshata nge-25 kaMeyi ngo-1930, xa wayeneminyaka elishumi elinesithandathu kwaye wayenamashumi amathathu. Bebonke, baba nabantwana abathandathu, emva kweminyaka elishumi elinesithandathu sitshatile, umyeni wakhe wasweleka.
Kwiminyaka emininzi elandelayo, uElizabhete wayesokola ukuzinyamekela yena nosapho. Ngo-1948, ubuKomanisi nguRhulumente waseHungary wayeyinkosi enengcwangu, kwaye wagxothwa emsebenzini wakhe wokuqala ngenxa yokuba wayenomfanekiso oqingqiweyo kaMama osikelelekileyo ekhayeni lakhe. Ngumntu okhutheleyo okhutheleyo, uElizabhete akazange abenandipha yokufumana umvuzo omde kwimisebenzi yakhe emide awayehlala kuyo, njengoko wayezabalazela ukondla usapho. Ekugqibeleni, bonke abantwana bakhe batshata, kwaye ethubeni, babuyela naye, weza nabantwana babo kunye nabo.
Ubomi obuthandazekileyo bukaElizabethe bamenza ukuba abe nguCarmelite, kwaye ngo-1958 eneminyaka engamashumi amane anesihlanu, wangena iminyaka yobumnyama beminyaka emithathu. Malunga nelo xesha, waye waqala ukuba neengxoxo ezisondeleyo neNkosi kwiindawo eziphakathi, elandelwa ziingxoxo kunye neNtombi Enyulu uMariya kunye nengelo lakhe eligcinayo. Nge-13 kaJulayi ngo-1960, uElizabhete waqala kwidayari ngokwesicelo seNkosi. Iminyaka emibini kule nkqubo, wabhala:
Ngaphambi kokufumana imiyalezo evela kuYesu nakwiNtombi Enyulu uMariya, ndafumana le nkxaso ilandelayo: 'Kuya kufuneka ungazinikeli ngokwakho, kuba sizakuphathisa uthumo olukhulu, kwaye uzakuwuphakama lo msebenzi. Nangona kunjalo, oku kunokwenzeka kuphela ukuba uhlala ungazicingeli ngokupheleleyo, uzilahlile. Olo thumo lubekwa kuwe kuphela xa ufuna nalo ngokukhululekileyo.
Impendulo ka-Elizabeth ngu "Ewe", kwaye ngaye, uYesu noMariya baqala umbutho weCawa phantsi kwegama elitsha elinikwe uthando olukhulu naphakade uMariya analo ngabo bonke abantwana bakhe: "Malangatye oThando."
Kwenzeka ntoni Idayari yokomoya, UYesu noMariya bafundisa uElizabhete, kwaye bayaqhubeka ukuyalela abathembekileyo kubugcisa baphezulu bokubandezeleka ukusindiswa kwemiphefumlo. Imisebenzi yabelwa usuku ngalunye lweveki, olubandakanya ukuthandaza, ukuzila ukutya, kunye nokuhlala ubusuku, kunye nezithembiso ezintle eziqhotyoshelwe kubo, zilungiselelwe ngeefayile ezikhethekileyo zababingeleli nemiphefumlo yentlambululo. Kwimiyalezo yabo, uYesu noMariya bathi ukuKhanya koThando lweNhliziyo kaMariya engaPhakamileyo lolona lubaba lubalaseleyo wanikwa uluntu ukusukela ekuBumbeni. Kwaye kwikamva elingekude kakhulu, idangatye lakhe liya kuligqiba lonke ilizwe.
UKhadinali Péter Erdő wase-Esztergom-Budapest, Primate of Hungary, wamisela ikhomishini yokufunda Idayari yokomoya kunye neenkcazo ezahlukeneyo ezazinikelwe ngoobhishophu basekuhlaleni kwihlabathi liphela kwi-Flame of Love intshukumo, njengombutho wabucala wabathembekileyo. Ngo-2009, ikhadinali ayinike i-Imprimatur kuphela Idayari yokomoya, kodwa samkela iindawo ezingaqondakaliyo zikaElizabhete kunye nemibhalo njengeyinyani, "sisipho esiya kwiCawe." Ukongeza, wanika imvume yakhe yokwahlukana kombutho woLangazelelo loThando, esebenze ngokusemthethweni kwiCawa ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini. Okwangoku, le ntshukumo ifuna ngakumbi ukuxhaswa njengeManyano yoLuntu yaBathembekileyo. Ngomhla we-19 kaJuni ngo-2013, uPope uFrancis wayinika intsikelelo yakhe yabaPostile.
Ithathwe kwincwadi ethengisa kakhulu, Isilumkiso: Ubungqina kunye neziprofetho zoMqondiso weSazela.
Umbingeleli, uMystic, i-Exorcist, uMsunguli kunye noMongameli Jikelele we-Apostolic Fraternity of Saint Benedict Joseph Labre
(Umyalelo osekwe ngo-2012)
Umbingeleli oza kufunda ngaye, ngelishwa, ebejolise kwizityholo ezininzi eziphosakeleyo. Oku kuchazwa ngokweenkcukacha Apha. Bonke kufuneka bazi ukuba uFr. NguMichel hayi ukuxhasa imiyalezo yabanye ababonwayo (umz. uJohn Leary, okanye imiyalezo egwetywe ngokusesikweni "kaMaria Divine Mercy" okanye "Umkhosi kaMariya"). UFr. UMichel akakukhuthazi ukusinda (ukhuthaze kuphela ukuba neenyanga ezimbalwa zokutya ngesandla ngenxa yobulumko, ekungekho mntu unokuphikisana naye emva kwe-COVID-19), kwaye engayaleli nabaphulaphuli bakhe ukuba bayokwakha ngokwasemzimbeni “ refuges. ” Okokugqibela, amarhe okuba “ugwetyiwe” yiDiocese yakhe abubuxoki; bobabini kunye neQela awalisekayo bakwimeko entle neCawa kwaye bakwimeko yokuthobela ngokupheleleyo i-Ecclesiastical Authority, nalapho uFr. UMichel ufumene iindlela ezininzi zokuvunywa.
Kukho amarhe amaninzi obuxoki ajikeleza kwi-Intanethi esithi uFr. UMichel wathetha izinto, enyanisweni, angazange azithethe. Isikhokelo esithembekileyo sokuba zithini na iimfundiso zakhe, nceda ubhekise kumagama athethwe nguye, onokuthi umamele kumaphepha ale ndawo, kunye no-Fr. Imvume kaMichel ecacileyo yokuthumela apha.
Oku kulandelayo kuthathwe kwincwadi ethengisa kakhulu, Isilumkiso: Ubungqina kunye neziprofetho zoMqondiso weSazela:
Fr. UMichel Rodrigue ngumsunguli kunye no-Abbott wenkqubo entsha yenkolo evunyiweyo yiCawa yamaKatolika: I-Apostolic Fraternity yeSt Benedict Joseph Labre kwidayosisi ka-Amosi eQuebec, eCanada. Uzalelwe kwintsapho ethembekileyo yamaKatolika yabantwana abangamashumi amabini anesithathu, uMichel wakhula elihlwempu. Intsapho yakhe yahlala kwifama encinci, apho umsebenzi onzima kunye nokuhamba uhambo olude ngeCawa Mass kunye nabantwana abaninzi abakhwele ihashe bagcina usapho lwayo luphila emzimbeni kunye nasemoyeni.
NjengoSt Padre Pio kunye neminye imiphefumlo ekhethiweyo, uThixo uYise waqala ukuthetha noMichel esemncinci. UFr uthi: “Xa ndandineminyaka emithathu ubudala. Michel, "UThixo waqala ukuthetha kum, sasincokola rhoqo. Ndikhumbula ndihleli phantsi komthi omkhulu emva kwekhaya lethu kwifama yasekhaya ndibuze kuThixo, 'Ngubani owenza lo mthi?'
Waphendula wathi: 'Ndenze njalo. Kwaye xa wabiza igama elithi, "Ndim," ndanikwa ngesiquphe umbono omkhulu woMhlaba, indalo iphela, kunye nam, ndaqonda ukuba yonke into yenziwe kwaye yabakho ngaye. Ndacinga ukuba wonke umntu uyathetha noThixo uYise. Ukusukela kwiminyaka emithathu ukuya kwesithandathu, iNkosi yandiyalela elukholweni kwaye yandinika imfundo esesikweni. Uye wandixelela ukuba, xa ndineminyaka emithathu, ndiza kuba ngumbingeleli. U-Thixo uBawo wanika uMichel imfundo egqibeleleyo kwimfundo yezakwalizwi ethi xa yaya kwi-Grand Seminary yaseQuebec emva kwesikolo samabanga aphakamileyo, yavavanya iklasi yayo ngo-A. Emva koko uMichel wafunda isayikholoji kunye neenkalo zakwalizwi, ezinje nge-mariology, i-pneumatology, imibhalo yooTata beCawa, waphumelela ugqirha kwezemfundo.
Emva kokuseka nokulawula indawo yokuhlala yolutsha olungenamakhaya, eyabanika ukhathalelo ngokwasemoyeni nangokomoya, uMichel Rodrigue wamiselwa waba ngumbhali wentlangano eneminyaka engama-XNUMX ubudala. Usebenze njengomfundisi wecawe iminyaka emihlanu emantla e-Ontario de ubhishophu wakhe waqonda ukuba iitalente zakhe ziya kusetyenziswa ngokufanelekileyo ekwakheni abefundisi abaza kubakho. Fr. UMichel emva koko waba ngumbhali waseSulpist ofundela ubufundisi kwi-Grand Seminary yaseMontreal.
Ngobusuku beKrisimesi, ka-2009, uFr. Ububingeleli bukaMichel batshintsha ngendlela engaqhelekanga. Wavuswa ebusuku ngobukho buka-St. Benedict Joseph Labre, owayeme ecaleni kwebhedi yakhe, egxalabeni egxalabeni ukuze anake. Fr. Wavuka uMichel weva ilizwi likaBawo lisithi, “Yima.” Ke uFr. Wasukuma uMichel. "Yiya ikhompyuter." Wathobela ke. "Mamela ubhale." Kulapho uThixo waqala walela umthetho-siseko wonke wenkolo entsha, ngokukhawuleza kunoFr. UMichel unokuchwetheza. Kwakufuneka axelele uThixo ukuba ahlise isantya!
Ke uThixo ngequbuliso wamgibisela impama uFr. UMichel waya kwindiza engaqondakaliyo kumhlaba okuDiocese ka-Amosi, eQuebec, apho wayefuna ukuba kwenziwe khona indlu yoonongendi, wambonisa ngokweenkcukacha uyilo lweemonki. UThixo uYise uxelele uFr. Michel ukuba uza kuba ngumsunguli wale monastery. Wayeqala inkqubo entsha yenkolo ebizwa ngokuba yiFraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (I-Apostolic Fraternity yeSt Joseph Benedict Labre) ukulungiselela abaphathi ngekamva leCawa yamaKatolika. Fr. Kuqala uMichel uphendule uloyiko, njengoko iimbophelelo zakhe bezingaphezulu kwamandla, kodwa wakhawuleza waqonda ukuba ukungavumi ku-Bawo yayingeyondlela. Namhlanje isakhiwo sokuqala sezindlu zoonongendi sesakhiwe ngoku, kanye njengoko wayefuna.
UThixo unike uFr. UMichel Rodrigue oneziphiwo ezingaqhelekanga zobukrelekrele nezomoya, njengokuphilisa, ukufunda imiphefumlo, imemori yokufota (eye yancipha emva kwezifo ezinzima kunye nokuhlaselwa sisifo sentliziyo!), Isiprofetho, ukubonwa, kunye nemibono. Unemvelo evuyayo kunye nokuhleka okulungeleyo, ngelixa kwangaxeshanye, ubuzaza obukhulu ngokubhekisele kwizinto zikaThixo. Uye wenza i-exorcism, ukongeza kwimisebenzi yakhe njengoprofesa weseminari, umphathiswa wesibhedlele, umfundisi weparishi, kwaye ngoku kutsha nje, njengomsunguli kunye ne-Superior General yenkolo entsha eQuebec ethetha isiFrentshi. UFr. UMichel Rodrigue ufumana inkxaso epheleleyo kubhishophu wakhe, kwaye zonke izinto azibonileyo kunye nemibono zinikezelwa kwindawo yakhe yesiqhelo ukuze yamkelwe.
Inenekazi lethu elibizwa nguFr. UMichel Rodrigue “ngumpostile wamaXesha okuGqibela.” Unikwe ulwazi oluchanekileyo noluluncedo ngekamva lomhlaba lethu. Fr. IMichel, ke ngoko, ipeyinta kwi-canvas enkulu, etyhila unxibelelwano kunye nokuhambelana kwesiprofetho sexesha lethu, kubandakanya nezo zikwisibhalo. Ngoku ndiyaqonda! Ngoku ndiyabona! ” Batsho abantu abamvileyo uFr. UMichel kunye nabakhe bahlala kwizicatshulwa zesiprofetho kwaye babona ngamehlo.
Amagama kaFr. IMichel kule webhusayithi ithathwe kwiirekhodi zentetho yakhe. Ezinye zeentetho zakhe kwinto enye ziye zadityaniswa zaba nye, kwaye kwezinye iimeko, uguqulelo asilogama ukuze kusetyenziswe igrama efanelekileyo yesiNgesi.
Fr. UMichel ngunyana othobekileyo weCawa yamaKatolika. Iiwebhusayithi ezimbalwa ziye zathumela, ngaphandle kwemvume yakhe, amagama ngaye nangaye, ezingekho nyanisileyo. Fr. Umzekelo, uMichel, akaxhasi okanye akazi nemiyalezo kaMaria Divine Mercy, kwaye uxhasa uphando luka-Bishop Matthew H. Clark ngoJohn Leary, obhengeze ukuba imiyalezo ka Mnu Leary yayivela ebantwini. Jonga ingxelo yakhe esayiniweyo apha.
Siyakumema ukuba ufunde ngoFr. URodrigue, ukuqala ngebali lakhe kunye nokulandela izicatshulwa kunye neevidiyo ngokulandelelana kwazo. Ukuhamba kuzo nangayiphi na enye indlela kunokukuzisela ukukrutha ukuqonda kwakho, njengoko intetho nganye kunye nomyalezo ovela ezulwini wakha okokugqibela. Njengabaxhasi bale webhusayithi, sivakalelwa kukuba uFr. Izambulo zikaMichel kufuneka zivavanywe njengaso nasiphi na isityhilelo sabucala, kwaye zikhuthaze abafundi ukuba benze njalo ngokweCatechism yeCawa yamaKatolika:
Khokelwa yiMagisterium yeCawa, i sensid fidelium Uyayazi indlela yokuqonda kunye nokwamkela kwezi zityhilelo nokuba yeyiphi na into ebiza ubizo lukaYesu okanye abangcwele bakhe kwiCawe. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-67
Fr. Umyalelo omtsha kaMichel, i-Apostolic Fraternity yeSt. Benedict Joseph Labre eQuebec sisipho esingenakuthenjwa kwikamva leCawa. Iwiswe nguThixo, i-monastery yesibini yomyalelo isakhiwa. Ukuba ividiyo ikukhuthaza ukuba uthenge incwadi, ISILUMKISO: Ubungqina kunye neziprofetho zoMqondiso weSazela, ngokusebenzisa I-QueenofPeaceMedia.com, faka nje ikhowudi yekhuphoni, i-FRATERNity, kwinqwelo okanye kwiphepha lokuphuma, kwaye inkcitho iya kuthunyelwa ukuxhasa uF. Iholo elitsha laseMichel elakhiwayo. Sinegalelo ku-Countdown eBukumkanini sikumema ukuba unike inkxaso yakho yezemali ngqo kuFr. Michel ngoyena mzamo ubaluleke kakhulu. Ukuba uziva ubizelwe, nceda uthumele iminikelo kwidilesi engezantsi. (Fr. Michel akazange asibuze ukuba senze le nto! Kwakhona, ayikho indlela kwi-intanethi yokwenza igalelo).
Nceda uthumele iitshekhi ezenziwe ku:
Intsapho yabaPostile bakaSt. Benedict Joseph Labre
Utata uStefano Gobbi
I-Italiya (1930-2011) uMfundisi, uMystic, kunye noMsunguli wentshukumo yabaFundisi bakaMarian
Oku kulandelayo kulungelelaniswe kakuhle, ngokuyinxalenye, kwincwadi, ISILUMKISO: Ubungqina kunye neziprofetho zoMqondiso weSazela, iphe. 252-253:
Utata uStefano Gobbi wazalelwa eDongo, e-Itali, emantla eMilan ngo-1930 kwaye wasweleka ngo-2011. Njengomntu olilungu, waphatha i-arhente ye-inshurensi, emva koko watsalelwa kubabingeleli, waya kugqirha IYunivesithi yasePontifical Lateran eRoma. Ngo-1964, wanyulwa eneminyaka engama-34.
Ngo-1972, iminyaka esibhozo engumbingeleli wakhe, uF. UGobbi uhambe kuhambo oluya eFatima, ePortugal. Ngexesha wayethandaza kwisakhiwo seLady Lady yethu kubafundisi abathile ababeyekile ukubiza amagama abo kwaye bezama ukuzibandakanya nemibutho yokuvukela iCawa yamaKatolika, waliva ilizwi leNkosikazi yethu limcela ukuba ahlanganise abanye abefundisi abazokuvuma ukungcwalisa bona ngokwabo kwiNtliziyo eNgenakuguquka kaMariya kwaye bamanyaniswe ngokuqinileyo noPopu neCawe. Le yayiyindawo yokuqala yamakhulu eendawo zangaphakathi ukuba uFr. U-Gobbi uza kufumana lonke ixesha lobomi bakhe.
Bakhokelwe yile miyalezo ivela ezulwini, uF. UGobbi waseka iMalian Movement yaBabingeleli (i-MMP). Imiyalezo yethu yenenekazi ukusukela ngoJulayi ngo-1973 ukuya kuDisemba ngo-1997, ngokudlula kwiindawo eziya kuFr. UStefano Gobbi, wapapashwa kule ncwadi, KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethu, efumene i-Imprimatur yeekhadinali ezintathu kunye noobhishophu abaninzi kunye noobhishophu kwihlabathi liphela. Umxholo wayo unokufumaneka apha: http://www.heartofmaryarabic.com/wp-content/uploads/2015/04/The-Blue-Book.pdf
Ekwazisweni kwencwadana yezandla de de facto yeMMP: KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethu, ithi malunga nentshukumo:
Kungumsebenzi wothando ukuba iNtanda ka-Mariya kaMariya ivuselela eCaweni namhlanje ukuze bancede bonke abantwana bakhe baphile, ngethemba kunye nethemba lokuzithemba, amaxesha abuhlungu okuhlanjululwa. Kula maxesha omngcipheko omkhulu, uMama kaThixo kunye neCawe uthatha inyathelo ngaphandle kokuthandabuza okanye ungaqinisekanga ukuba uncede kuqala nababingeleli, abangonyana bolonyuko lakhe. Ngokwendalo, lo msebenzi wenza ukusetyenziswa kwezixhobo ezithile; kwaye ngendlela ethile, kukhethwe u-Don Stefano Gobbi. Ngoba? Kwindinyana enye yencwadi, kunikwa le nkcazo ilandelayo: “Ndikunyulile ngenxa yokuba oyena mntu usesona sixhobo siphantsi; kungoko kungekho namnye uya kuthi, ngumsebenzi wakho lo. Intshukumo yabafundisi baseMarian kufuneka ibe ngumsebenzi wam ndedwa. Ngobuthathaka bakho, ndiya kubonakalisa amandla am; ngokulunga kwakho, ndiya kubonakalisa amandla am ” (umyalezo kaJulayi 16, 1973). . . Ngale ntshukumo, ndibiza bonke abantwana bam ukuba bazinikezele kwiNtliziyo yam, kwaye basasaze yonke indawo imithandazwe.
Fr. U-Gobbi usebenze ngokungakhathali ukufezekisa uthumo lweNenekazi lethu alinikiweyo. Nge-Matshi ka-1973, malunga nababingeleli abangamashumi amane babejoyine iMarian Movement yeBabingeleli, kwaye ngasekupheleni kuka-1985, uFr. UGobbi waye wakhwela ngaphezulu kwe-350 iindiza zomoya kwaye uthathe uhambo oluninzi ngemoto noololiwe, etyelele amazwekazi amahlanu kaninzi. Namhlanje lo mbutho ucaphula ubulungu bookhadinali noobhishophu abangama-400, ngaphezulu kwe-100,000, XNUMX yama-Katolika, kunye nezigidi zabangama Katolikhi kwihlabathi liphela, kunye nemikhuleko yokuthandaza kunye nokwabelana ngobudlelwane phakathi kwabafundisi kwaye bahlala bethembekile kuyo yonke indawo yehlabathi.
Ngo-Novemba ka-1993, i-MMP e-United States, ese-St. Francis, Maine, yafumana intsikelelo esemthethweni kuPopu John Paul II, ogcine ubudlelwane obusondeleyo no Fr. UGobbi kwaye wabhiyozela iMass kunye naye kwi-chapel yakhe yangasese e-Vatican minyaka le.
Imiyalezo uMama wethu ayinike uFr. I-Gobbi ngokusebenzisa iindawo zangaphakathi zezinye zezona zininzi kwaye zinenkcukacha malunga nothando lwabantu bakhe, ukuxhasa kwakhe rhoqo abefundisi bakhe, intshutshiso ezayo yeCawe, nento ayibiza ngokuba yi "Second Pentekoste," elinye igama lesilumkiso, okanye Ukukhanya kwesazela sayo yonke imiphefumlo. Kule Pentekoste yesiBini, uMoya kaKristu uza kungena ngomphefumlo ngamandla nangamandla kangangokuba kwisithuba semizuzu emihlanu ukuya kwelishumi elinesihlanu, wonke umntu uya kububona ubomi bakhe besono. Imiyalezo kaMarian kuTata uGobbi ibonakala ngathi iyalumkisa ukuba lo msitho (kwaye emva koko uMmangaliso othenjisiweyo kunye nesiKohlwayo okanye isohlwayo) wawuzakwenzeka ekupheleni kwenkulungwane yamashumi amabini. [Umyalezo # 389] Imiyalezo kaDade wethu Wempumelelo Enhle ikwakhankanya ukuba ezinye zezi ziganeko ziya kwenzeka “kwinkulungwane yamashumi amabini.” Ke yintoni echaza lo mahluko kumgca wexesha wehlabathi?
Ndiyolongela ixesha lenceba ngenxa yaboni. Kodwa yeha ke ukuba abayiqondi ngeli xesha lokundwendwela kwam. (Iidayari yeSt Faustina, # 1160)
Kwimiyalezo kaMama Oyisikelelekileyo kuFr. UGobbi, wathi,
Amaxesha amaninzi ndikhe ndangenelela ukubuyisela umva phambili ekuqhubekeni kwetyala elikhulu, lokucoca uluntu oluhlwempuzekileyo, ngoku olulawulwa yimimoya yobubi. ” (#553)
Kwaye kwakhona kuFr. U-Gobbi utyhile:
“… .Ngoko ke ndibuye ndiphumelele ekumiseni ixesha lesohlwayo esimiselwe ngumthetho kaThixo kuluntu oluye lwambi kunangexesha lomkhukula.” (# 576).
Kodwa ngoku, kubonakala ngathi, uThixo akalibazisi. Izehlo ezazishunyayelwe nguMama osikelelekileyo ku-Fr. Sele uStefano Gobbi eqalile.
PhawulaMalunga neminyaka engama-23 eyadlulayo, indoda nebhinqa eCalifornia, ababehlala kunye ubomi besono, baqala inguquko enzulu ngenceba kaThixo. Umfazi waye wakhutshelwa ngaphakathi ukuba aqale iqela yerosari emva kokufumana i-Divine Mercy novena yakhe yokuqala. Kwiinyanga ezisixhenxe emva koko, umfanekiso oqingqiweyo weWomen yethu yeNhliziyo engafiyo kwiKhaya labo waqala ukulila ioyile kakhulu (kamva, eminye imifanekiso eqingqiweyo kunye nemifanekiso yaqala ukukhupha ioyile enevumba elimnandi ngelixa ebethelelwa emnqamlezweni kunye nomfanekiso oqingqiweyo weSt Pio. ukuxhonywa kwiziko leMarian elikwiNdawo yoNceba kaThixo eMassachusetts). Oku kwabakhokelela ekubeni baguquke kwimeko yabo yokuphila kwaye bangene kumtshato wesakramente. Malunga neminyaka emithandathu kamva, yaqala indoda ngokuzwakalayo ukuva ilizwi likaYesu (oko kubizwa ngokuba yi "locutions"). Wayengenayo ikatekisisi okanye ukuqonda inkolo yamaKatolika, ke ilizwi likaYesu lalothusa kwaye lamngenisa. Nangona amanye amazwi eNkosi ayelumkisa, walichaza ilizwi likaYesu lihlala lihle kwaye lilungile. Uye wamndwendwelwa yi-St Pio kunye ne-St Thèrèse de Lisieux, iSt.Catherine yaseSiena, iSt. Emva kokuhambisa iminyaka emibini yemiyalezo kunye neemfihlo (ezaziwa kuphela yile ndoda kunye nokwaziswa kwixesha elizayo elaziwa yiNkosi kuphela) UYesu wathi kule ndoda, "Ndiyayeka ukuthetha kuwe ngoku, kodwa uMama wam uyakuqhubeka ekhokela.”Esi sibini saziva sibizelwe ukuqala umnyhadala wentshukumo yabefundisi baseMarian apho babezokucamngca ngemiyalezo kaNkosikazi wethu kuFr. UStefano Gobbi. Kwakuyiminyaka emibini kungena la mazwi uYesu azaliseka: Inenekazi lethu laqala ukumkhokela, kodwa ngendlela ebalaseleyo. Ngexesha le-cenacles, kwaye ngamanye amaxesha, le ndoda yayiza kubona "emoyeni" phambi kwayo amanani emiyalezo evela kwinto ebizwa ngokuba "Ibhuku eliluhlaza, ” ingqokelela yezityhilelo ezanikezelwa yiNkosikazi yethu kuFr. Stefano Gobbi, "KuBabingeleli boonyana Bethu abaziNtombazana." Kuyaphawuleka ukuba yenziwa yile ndoda hayi funda Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka ukuza kuthi ga ngoku (njengoko imfundo yakhe inqongophele kwaye enesiphene sokufunda). Kwiminyaka edlulileyo, la manani azenze imizimba yenyama angangqina ngezihlandlo ezininzi incoko ezithandekayo ezenzakalweni zazo, kwaye ngoku, iziganeko ezenzeka kwihlabathi liphela. Fr. Imiyalezo kaGobbi ayizange isilele kodwa ngoku bafumana ukuzaliseka kwabo ngexesha lexesha lokwenyani.
Nanini na xa la manani efumaneka kwi-Countdown to the Kingdom, siya kuyenza ifumaneke apha.
Ngengcwele yokusetyenzwa kweMarian esebenzayo ngokuqinileyo, yiyale incwadi, Ukuphambuka kweMantle kaMary: ukuBuyela eMoyeni kuNcedo lwezulu, ixhaswe ngu-Archbishop Salvatore Cordileone no-Bishop Myron J. Cotta, Ingubo kaMariya Ukucetyiswa Ijenali yomthandazo. Yabona www.MarysMantleConsecration.com.
UColin B. Donovan, STL, "Ukuhamba kukaMarian," Iimpendulo zeengcali ze-EWTN, ezifunyenwe ngoJulayi 4, 2019, https://www.ewtn.com/expert/answers/MMP.htm
Jonga apha ngasentla kwaye www.MarysMantleConsecration.com.
Ikomkhulu leLizwe le-Marian Movement yaBabingeleli e-United States yaseMelika, iNenekazi lethu lithetha nababingeleli abathandekayo,th Ushicilelo (Maine; 1988) p. xiv.
Ibid. iphe. xii.
Kutheni uGisella Cardia?
Ukusebenza eTrevignano Romano, e-Italy
Iiparitha zikaMarian ezityholwa eTrevignano Romano e-Itali ukuya eGisella Cardia zintsha. Baqala ngo-2016 emva kotyelelo lwakhe eMedjugorje, eBosnia-Herzegovina, kunye nokuthengwa kwesithombe seLady Yethu, ethi emva koko yaqalisa ukulila igazi. Iapparitions sele zingumxholo wosasazo lukamabonakude lukazwelonke e-Italia ngexesha apho imboni yaziphatha ngokuzola okumangalisayo ebusweni bokugxeka okwenzekileyo kubaphathi beeplatifomu kuye neencwadi ezimbini. A I-Nihil obstat kutsha nje unikezwe ngu-Archbishop malunga nenguqulelo yesiPolish yesibini yesibini yezi, KuCammino con Maria ("Endleleni noMariya") epapashwe ngu Edizioni Segno, equlathe ibali leapparitions kunye nemiyalezo ehambelana nayo ukuya kuthi ga ku-2018. Ngelixa langaphandle I-Nihil obstat ayizenzi ngokwayo in situ ukwamkelwa kwedayosisi kwezimbonakalo, ngokuqinisekileyo ayibalulekanga. Kwaye uBhishophu waseCivita Castellana ubonakala emxhasa ngokuzolileyo uGisella Cardia, enike ukufikelela kwangethuba kwindlu yeendwendwe yeendwendwe ezixineneyo ezaqala ukuhlangana endlwini kaCardia ukuba zithandaze, zakuba nje iindaba zisabonakala.
Zininzi izizathu eziphambili zokugxila kuTrevignano Romano njengomthombo wesiprofeto obalulekileyo nobalulekileyo. Okokuqala, umxholo wemiyalezo kaGisella uhlangana ngokusondeleyo kunye "nokuvumelana kwesiprofeto" esimele eminye imithombo yeli xesha, ngaphandle kokubonisa ukuba uyabazi ubukho babo (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, Fr. Michel Rodrigue, Fr. Adam Skwarczynski Iidayari zikaBruno Cornacchiola.).
Okwesibini, uninzi lweziprofetho ezigqithisileyo zesiprofetho ziya kubonakala ngathi zizalisekisiwe: ngokukodwa sifumana isicelo ngoSeptemba ka-2019 ukuba sithandaze eTshayina njengomthombo wezifo ezitsha ezinomoya. . .
Okwesithathu, imiyalezo ihlala ihamba kunye neziganeko ezibonakalayo, ubungqina bezithombe obufunyenwe KuCammino con Maria, esingekhe sibe sisiqhamo sokucinga okucingelyo, ngakumbi ubukho be-stigmata emzimbeni kaGiselle kunye nokubonakala kweminqamlezo okanye izicatshulwa zenkolo kwi igazi ezingalweni zikaGisella. Jonga imifanekiso ethathwe kwiwebhusayithi yakhe ebonakalayo https://www.lareginadelrosario.com/, ethi Siate testimoni (“yiba ngamangqina”), Abbiate fede (“yiba nokholo”), uMaria santissima (“uMariya ungcwele kakhulu”), uPopolo mio (“Abantu bam”, noAmore (“Uthando”).
Ewe kunjalo, oku kunokuba bubuqhetseba okanye ukuphazanyiswa ziidemon, njengoko kunjalo ngokulila komfanekiso weNtombi Enyulu kunye nemifanekiso kaYesu kwindlu kaGisella kunye nomyeni wakhe, uGianni. Uluvo lokuba iingelosi eziwileyo zinokuba semvelaphi yemiyalezo nangona kunjalo kubonakala kungenakulindeleka, zinikwe umxholo wazo wezenkolo kunye nokukhuthaza ubungcwele. Ngokunikwa ulwazi lwethu ngobungqina babakhuphi abagqithayo malunga nendlela iingelosi eziwileyo ziyamcekisa ngayo kwaye zimoyike uMariya ukuya kwinqanaba lokwala ukumthiya igama, amathuba okuba umntu anganyanzela ukuveliswa kwamagama athi "uMariya ungcwele kakhulu""UMaria santissima"egazini emzimbeni wemboni kuya kubonakala ngathi likufutshane no-nil.
Nangona kunjalo, amabala kaGisella, imifanekiso yakhe yegazi, okanye imifanekiso eqingqiweyo yegazi akufuneki, iyodwa, ithathwe njengophawu lobungcwele bombono njengokumnika i-blanche yekhadi ngokubhekisele kuwo wonke umsebenzi wexesha elizayo.
Ukanti bukhona ubungqina obongezekileyo bevidiyo yeziganeko zelanga phambi kwamangqina amaninzi ngexesha lokuthandaza kwindawo yoviwo, efanayo neziganeko ze "Dancing Ilanga" eFatima ngo-1917 okanye ubungqina obanikelwa nguPopu Pius XII kwiVandesi zaseVatican kwangoko ngaphambi kwesibhengezo. yeGama leNgcaciso ngo-1950. Ezi zinto, xa ilanga libonakala lilijikeleza, lidanyaza okanye liguqulwa laba ngumamkeli we-Eucharistic, ngokucacileyo alunakuthengiswa ngeendlela zabantu, kwaye ziyarekhodwa (nangona zingafezekanga) kwikhamera, nazo ngokucacileyo azinjalo sisiqhamo nje sokudibana ngokudibeneyo. Cofa apha ukubona ividiyo yommangaliso welanga (Trevignano Romano - 17 Settembre 2019 - Miracolo del sole / “Trevignano Romano - Septemba 17, 2019 - Ummangaliso welanga.”) Cofa apha ukubona uGisella, umyeni wakhe, uGianni, kunye nomfundisi, benikela ubungqina ngommangaliso welanga kwindibano kawonke-wonke yenye yeendlela zikaGisella zeNtombi Enyulu uMariya. (UTrevignano Romano miracolo del sole 3 gennaio 2020 / "Ummangaliso weTrevignano Romano welanga, nge-3 kaJanuwari ngo-2020")
Ukuqhelana nembali ye-apparitions yaseMarian kubonisa ukuba le mimangaliso kufuneka ithathwe njengesiqinisekiso sobunyani bonxibelelwano lwasezulwini.
UJennifer ngumama oselula waseMelika nomama wasekhaya (igama lakhe lokugqibela ligodliwe kwisicelo somlawuli wakhe wokomoya ukuze ahloniphe ubumfihlo bendoda yakhe kunye nosapho.) Wayeyiloo nto, mhlawumbi, into eyayinokuthiwa ngumKatolika "oqhelekileyo" ohamba ngeCawa. owayesazi okuncinci malunga nokholo lwakhe kwaye nangaphantsi ngeBhayibhile. Wakhe wacinga ngaxesha lithile ukuba “iSodom neGomora” yayingabantu ababini kwaye “iiNdawo eziBalaseleyo” ligama leqela lomculo werock. Emva koko, ngexesha loMthendeleko eMthendelekweni ngenye imini, uYesu waqala ukuthetha ngokuvakalayo kuye emnika imiyalezo yothando kwaye emyala esithi, “Mntwana wam, ulwandiso lomyalezo wam wenceba kaThixo. Kuba imiyalezo yakhe igxile ngakumbi kubulungisa ukuba kumele Yiza kwihlabathi elingaguqukiyo, ngokwenene bazalisa icandelo lomyalezo weSt. Faustina:
… Ngaphambi kokuba ndifike njengoMgwebi olilungisa, kuqala ndivula umnyango wenceba yam. Owala ukugqitha kumnyango wenceba yam, udlula ngomnyango wobulungisa bam.-Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari yaseSt Faustina, n. 1146
Ngenye imini, iNkosi yamyalela ukuba enze imiyalezo yakhe kuBawo Oyingcwele, uPopu John Paul II. Fr. USeraphim Michalenko, usekela-mphathi weofisi yaseSt. Faustina, waguqulela imiyalezo ka-Jennifer kwiPolish. Wabhukisha itikiti lokuya eRoma kwaye, ngokuchasene nawo onke amakhwiniba, wazifumana yena kunye neqela lakhe kwiziphaluka zangaphakathi zeVatican. Wadibana noMonsignor Pawel Ptasznik, umhlobo osondeleyo kunye nomnxibelelanisi kaPopu kunye noNobhala Waseburhulumenteni wasePoland kwiVatican. Imiyalezo idluliselwe ku-Cardinal Stanislaw Dziwisz, unobhala wobuqu kaJohn Paul II. Kwintlanganiso elandelayo, uMsgr. UPawel uthe, Ukusasaza imiyalezo kulo lonke ilizwe ngayo.
Kutheni uLuz de Maria de Bonilla?
Oku kulandelayo kulungiswa kwincwadi ethengisa kakhulu, ISILUMKISO: Ubungqina kunye neziprofetho zoMqondiso weSazela.
U-Luz de María de Bonilla ngumntu ongumKatolika ongaqondakaliyo, i-stigmatist, umfazi, umama, uMyalelo weSithathu ka-Agasti, kunye nomprofeti ovela eCosta Rica, ngoku bahlala eArgentina. Ukhulele kwikhaya elithanda inkolo ngokuzinikela okukhulu kwi-Ekaristi, kwaye njengomntwana, wanamava okutyelelwa ezulwini evela kwingelosi yakhe yokugada kunye noMama osikelelekileyo, awayebajonga njengabahlobo bakhe kunye nabantu ababafihlayo. Ngo-1990, wafumana ukuphiliswa ngokungummangaliso kwisigulo, kuhambelana nokundwendwelwa nguMama osikelelekileyo kunye nokubizwa esidlangalaleni ukubiza amava akhe angaqhelekanga. Kungekudala wayeya kubambeka kakhulu kungekuphela ebusweni bosapho-umyeni wakhe nabantwana abasibhozo, kodwa kwanabantu abasondeleyo kuye oqale ukuhlanganisana ukuze athandaze; Bona ke, benza isiko lokuthandaza, elihamba naye unanamhla.
Emva kweminyaka yokuyeka kwakhe ukuthanda kukaThixo, uLuz de María waqala ukuba neentlungu zomnqamlezo, aziphethe emzimbeni nasemphefumlweni. Oku kwenzeke okokuqala, wabelana, ngoLwesihlanu olungileyo: “INkosi yethu yandibuza ukuba ndifuna ukuthatha inxaxheba kwimbandezelo yakhe. Ndaphendula ngokuvuma, kwaye emva komhla wokuqhubeka komthandazo, ngobo busuku, uKrestu wabonakala kum emnqamlezweni kwaye wabelana ngenxeba lakhe. Yayibuhlungu into engachazeki, nangona ndiyazi ukuba nokuba kubuhlungu kangakanani na, ayisiyiyo intlungu akuyo uKristu uqhubeka ukubandezeleka ngenxa yoluntu. " (("Revelamos Quen Es la Vidente Luz de María," Iforos de la Virgen María, efikelele nge-13 kaJulayi ngo-2019, https: //forosdelavirgen.org/118869/luz-de-maria-reportaje))
Kwakungo-Matshi 19 ka-1992, apho uMama osikelelekileyo waqalisa ukuthetha rhoqo noLuz de María. Ukususela ngoko, wafumana imiyalezo emibini ngeveki kwaye ngamathub 'athile, inye kuphela. Imiyalezo yaqala ukuza njengeendawo zangaphakathi, ilandelwa yimibono kaMariya, oweza echaza uthumo lukaLuz de María. Andizange ndibubone ubuhle obungaka, U-Luz watsho ngokubonakala kukaMariya. Yinto ongenakuze uyiqhele. Ixesha ngalinye lifana nelokuqala.
Kwiinyanga ezininzi kamva, uMariya kunye noMichael oyiNgilosi enkulu bamazisa kwiNkosi yethu ngombono, kwaye ekuhambeni kwexesha, uYesu noMariya baya kuthetha naye ngeziganeko ezizayo, njengesilumkiso. Imiyalezo isuka ekubeni yimfihlo ukuya esidlangalaleni, kwaye ngokomyalelo kaThixo, kufuneka ayidlulisele kwihlabathi.
Uninzi lweziprofetho uLuz de María azifumeneyo sele zizalisekile, kubandakanya nokuhlaselwa kweTwin Towers eNew York, ekwaziswa kuye kwiintsuku ezisibhozo kwangaphambili. Kwimiyalezo, uYesu noMariya bavakalisa usizi lwabo olunzulu ngokungathobeli komntu umthetho kaThixo, nto leyo imkhokelele ekubeni angqamane nobubi kwaye enze into ngakuThixo. Balumkisa umhlaba ngeembandezelo ezizayo: ubukomanisi kunye nokufika kwazo; imfazwe nokusetyenziswa kwezixhobo zenyukliya; ungcoliseko, indlala, nobhubhani; Utshintsho, ukungazinzi ekuhlaleni, kunye nokuziphatha okubi; ukuchasana kweCawe; ukuwa koqoqosho lwehlabathi; ukubonakala koluntu kunye nolawulo lwehlabathi lomchasi-Kristu; ukuzaliseka kwesilumkiso, nommangaliso, kunye nezohlwayo; ukuwa kwe-asteroid, kunye nokutshintsha kwejografi yomhlaba, phakathi kweminye imiyalezo. Yonke le nto ayikoyiki, kodwa kukucenga umntu ukuba ajike ajonge kuThixo. Ayizizo zonke izigidimi zikaThixo eziyintlekele. Kukwakho namazwi okubanga kwakhona kokholo lwenene, ubunye babantu bakaThixo, uloyiso lwentliziyo engafiyo kaMariya, kunye noloyiso lokugqibela lukaKristu, uKumkani weNdalo iphela, xa kungasayi kubakho zahlulo, Siya kuba bantu banye phantsi koThixo omnye.
Utata uJosé María Fernandez Rojas uhleli ecaleni kukaLuz de María njengombheneleli wakhe kwasekuqaleni kwendawo yakhe kunye nemibono, kwaye ababingeleli babini basebenza naye ngokusisigxina. Imiyalezo ayifumanayo irekhodwa ngabantu ababini aze ayibhale. Omnye umbingeleli wenza izilungiso zopelo, aze omnye anike imiyalezo ingxelo yokugqibela ngaphambi kokuyifaka kwiwebhusayithi, www.revelacionesmarianas.com, Ukwabiwa kunye nehlabathi. Imiyalezo iqokelelwe kwincwadi enomxholo, Mabufike uBukumkani bakho, kwaye nge-19 kaMatshi ngo-2017, uJuan Abelardo Mata Guevara, SDB, u-Titular Bishop wase-Estelí, eNicaragua, babanikeza i-Imprimatur yeCawa. Ileta yakhe yaqala:
I-Estelí, eNicaragua, unyaka weNkosi yethu, nge-19 kaMatshi ngo-2017
Ukuhlonitshwa kukaPatrick oyiNgcwele uJoseph
Imiqulu equlathe "ISIVIVINYO SOKUGQIBELA" evela ezulwini, enikwe uLuz de María ukusuka ngonyaka ka-2009 ukuya kuthi ga ngoku, ndinikwe imvume yokuvunywa. Ndiphonononge ngokholo kunye nomdla kule miqulu inesihloko esithi, BUYA BUKUMKANI BUZA, kwaye ndifikelele kwisigqibo sokuba bayabiza uluntu ukuba lubuyele kwindlela ekhokelela kubomi banaphakade, nokuba le miyalezo isibongozo esivela ezulwini ngala maxesha. apho umntu kufuneka alumke angaphambuki kwiLizwi eliNgcwele.
Kwisityhilelo ngasinye esinikwe uLuz de María, INkosi yethu uYesu Krestu kunye nentombi esikelelekileyo uMariya akhokele amanyathelo, umsebenzi, kunye nezenzo zabantu bakaThixo kula maxesha apho uluntu kufuneka lubuyele kwiimfundiso ezikwincwadi eNgcwele.
Imiyalezo ekule miqulu iluluvo lokomoya, ubulumko bobuthixo, kunye nokuziphatha kwabo babamkelayo ngokholo kunye nokuthobeka, ke ndicebisa ukuba ufunde, ucamngce, kwaye usebenze.
NDIVAZA ukuba andifumani mpazamo yemfundiso izama ukholo, isimilo kunye nemikhwa elungileyo endinikezela ngayo kwezi ncwadi. Ndikunye nentsikelelo yam, ndivakalisa iminqweno yam "yamaZulu eZulu" aqulathwe apha ukwenza isithembiso kuzo zonke izinto ezilungileyo. Ndicela iNkosazana enguMariya, uMama kaThixo noMama Wethu, ukuba basithethelele ukuze intando kaThixo izaliseke
". . . Emhlabeni njengasezulwini (Mt, 6). ”
Intloko kaBhishophu wase-Estelí, Nicaragua
Apha ngezantsi kukho umboniso owanikezelwa nguLuz de María e-Esteril Cathedral eNicaragua, kunye nengcaciso eyanikelwa nguBishophu uJuan Abelardo Mata owamnikeza i-Imprimatur:
Cofa apha ukuze ubone ividiyo.
Ewe, imvumelwano yamazwe ngamazwe kubonakala ngathi yavela ukuba imiyalezo kaLuz de Maria de Bonilla ifanelekile ukuba iqwalaselwe. Kukho izizathu ezahlukeneyo zoku, ezinokushwankathelwa ngolu hlobo lulandelayo:
• I nangemvume yecawa yamaKatolika, enikezwe ngu-Bishop Juan Abelardo Mata Guevara wase-Esteril ngo-2017 kwimibhalo ka-Luz de Maria emva ko-2009, kunye nengxelo yakhe eqinisekisa ukukholelwa kwakhe kwimvelaphi yabo engaphezulu kwendalo.
• Umxholo ophakamileyo we-theoloji kunye nokuzonwabisa kwale miyalezo kunye nokuzinikela.
Inyaniso yokuba uninzi lweziganeko ezixelwe kwangaphambili kule miyalezo (ukuqhuma kwentaba-mlilo kwiindawo ezithile, ukuhlaselwa kwabanqolobi kwiindawo ezithile, njengeParis) sele izalisekile ngokuchanekileyo.
Ukudibana ngokusondeleyo nangokuneenkcukacha, ngaphandle koncedo lokuchazwa, kunye nemiyalezo evela kweminye imithombo enzulu apho uLuz de Maria kubonakala ngathi wayengazi ngokobuqu (njengoFr. Michel Rodrigue kunye nombono waseHeede, eJamani ngexesha lesithathu. Reich).
• Ubukho benani eliqiqayo leziganeko ezingaqondakaliyo ezihamba kunye noLuz de Maria (ukubekwa ibala, ukubethelelwa kwegazi ebusweni bakhe, imifanekiso yenkolo ekhupha ioyile). Ngamanye amaxesha ezi zinto ziphambi kwamangqina esinazo ubungqina bevidiyo (Bonayo apha).
Ukufunda ngakumbi malunga noLuz de Maria de Bonilla, bona incwadi, ISILUMKISO: Ubungqina kunye neziprofetho zoMqondiso weSazela.
Kutheni uMarco Ferrari?
Ngo-1992, uMarco Ferrari waqala ukudibana nabahlobo bakhe ukuba bathandaze kwiRosari ngokuhlwa kwangoMgqibelo. Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 26 weva ilizwi lisithi "Nyana, bhala!" "Marco, nyana wam, musa ukoyika, ndingumama wakho, ndibhalele bonke abantakwenu noodadewenu". Uhlelo lokuqala luka "Umama woThando" njengentombazana eneminyaka eli-1994-15, lwenzeka ngoJulayi 16; Kunyaka olandelayo, uMarco waphathiswa imiyalezo yabucala ngoPopu John Paul II kunye noBhishophu waseBrescia, awayidlulisela ngokufanelekileyo. Ubuye wafumana iimfihlo ezili-1994 ngokubhekisele kwihlabathi, i-Italiyane, ii -apparitions emhlabeni, ukubuya kukaYesu, iBandla kunye neMfihlo yesiThathu yeFatima.
Ukusukela ngo-1995 ukuya ku-2005, uMarco wayene-stigmata ebonakalayo ngelixa ebolekwe kwaye waphinda wadibana nePastion yeNkosi ngolwesihlanu olungileyo. Ezinye izinto ezingachazwanga ngokwenzululwazi ziye zajongwa eParatico, kubandakanywa nokuqhekeka komfanekiso we "Umama wothando" phambi kwamangqina ali-18 ngo-1999, kunye nemimangaliso emibini yobukhenkethi ngo-2005 nango-2007, eyesibini isenzeka induli ye-apparition enabantu abangaphezu kwe-100. Ngelixa kusungulwe ikhomishini yophando ngo-1998 nguBishophu waseBrescia Bruno Foresti, Icawe ayikaze ithathe isikhundla ngokusemthethweni kwizicelo, nangona iqela lomthandazo likaMarco livunyelwe ukuba lihlangane kwicawa ese-diocese.
UMarco Ferrari ubeneentlanganiso ezintathu noPopu John Paul II, ezintlanu noBenedict XVI kunye ezintathu noPapa uFrancis; ngenkxaso yeCawa esemthethweni, umbutho weParatico useke uthungelwano olubanzi lwamazwe aphesheya lwe- “Oase of the Mother of Love” (izibhedlele zabantwana, izindlu zeenkedama, isikolo, uncedo lweqhenqa, amabanjwa, iziyobisi iziyobisi…). Isibhengezo sabo sisandula ukusikelelwa nguPopu uFrancis.
UMarco uyaqhubeka nokufumana imiyalezo ngeCawa yesine yenyanga nganye, umxholo wayo ungaguquki kakuhle neminye imithombo yesiprofetho ethembekileyo.
Inkcukacha ezithe vetshe: http://mammadellamore.it/inglese.htm
Kutheni uMartin Gavenda?
Ukulandela iTurzovka (1958-1962) kunye neLitmanova (1990-1995), ilali yaseDechtice yindawo yesithathu yokubonakala eSlovakia, apho iziganeko ezingachazwanga ngokwesayensi zaqala ngoDisemba 4, 1994. Endleleni egodukayo ukusuka kwiCawa leMisa, abantwana abane Ukuthetha ngokuthandaza ngomnqamlezo wasekhaya eDobra Voda xa omnye wabo wabona ilanga lijikeleza kwaye litshintsha umbala. Beqonda ukuba lo ingangumqondiso, abantwana baqala ukuthandaza iRosari. UMartin Gavenda - ngubani oza kuba ngumboni oyintloko weembonakalo - wabona ukukhanya okumhlophe kunye nomntu obhinqileyo owathi wayefuna ukumsebenzisa kwizicwangciso zikaThixo. Ekubonakaleni kwabasetyhini ngokulandelayo, abantwana bafefa lo mfanekiso ungaqondakaliyo ngamanzi asikelelweyo, becinga ukuba isenokuba yidemon, kodwa lo mfazi akazange anyamalale. Izibhengezo zaqhubeka eDobra Voda, emva koko eDechtice, apho abanye abantwana nabo baqala ukufumana imiyalezo. Nge-15 ka-Agasti ka-1995, umfazi wazichaza njengoMariya, uKumkanikazi woNcedo.
Imixholo ephambili yemiyalezo evela eDechtice, eqhubeka unanamhla, ngokufanayo iyafana naleyo ifunyenwe kwezinye iisayithi ezibonakalayo ezibonakalayo kumashumi eminyaka akutshanje. Babonisa inzame zikaSathana zokutshabalalisa iCawe kunye nehlabathi liphela kunye nonyango olunikezwe lizulu: iisakramente, iRosari, ukuzila ukutya kunye nokuhlawulela amatyala enziwe kwiintliziyo zikaYesu noMariya, indawo yokusabela kunye "netyeya" yabanyanisekileyo amaxesha.
Abantwana bamkelwa basikelelwa nguMgr Dominik Toth we-archdiocese yaseTrnava-Bratislava, apho kwaqhutywa khona uphando olusemthethweni ngo-Okthobha 28, 1998. .
Kutheni le mibono yeNenekazi lethu leMedjugorje?
IMedjugorje yenye yeendawo ezityelelwayo "ezisebenzayo" kwihlabathi. Ngomhla ka-Meyi we-2017, ikhomishini esekwe ngu-Pope Benedict XVI kwaye ikhokelwe ngu-Cardinal Camillo Ruini iqukumbele uphando lwayo kwizibuko. Ikhomishini ingummangaliso bavotela ukuthanda yokuqonda indalo engaphaya kwendalo kweembonakalo zokuqala ezisixhenxe. NgoDisemba waloo nyaka, uPopu uFrances waphakamisa ukumiswa kwenkqubo yohambo lwedayosese, ngokunyusa iMedjugorje kwisikhundla sendawo engcwele. UBhishophu Omkhulu waseVatican uHenryk Hoser wanyulwa ngupopu ukuba ajongane nokunyanyekelwa kwabahambi ngezonqulo apho, evakalisa ngoJulayi 2018 ukuba le dolophana "ingumthombo wobabalo kwihlabathi liphela." Kwincoko yakhe noBhishophu Pavel Hnilica, uPopu John Paul II wathi, "iMedjugorje yinto eqhubekayo, ukwandiswa kukaFatima." Kuza kube yimhla, izibhengezo kunye neentsikelelo ezihamba nazo zivelise ukuphiliswa kwamaxwebhu angaphezu kwamakhulu amane, amakhulu emisebenzi yobufundisi, amawaka eenkonzo emhlabeni jikelele, kunye nokuguquka okungenakubalwa.
Ukujonga ngokubanzi imbali yeCawa yokuqonda iMedjugorje, funda IMedjugorje… Into onokungayazi. UMark Mallett ukwanike iimpendulo kwizichaso ezingama-24 kwimbonakalo. Funda IMedjugorje… Ukutshaya uGunser.
Malunga nokukhuthaza ukufundwa kweenguqulelo ezimangalisayo njengesiphumo se-appraitions yaseMedjugorje kunye nokufunda iakhawunti yeapparitions zokuqala, bona abathengisi ababalaseleyo, EFUMANEKILEYO YOBUGCISA: Amabali angummangaliso wokuphilisa nokuguqula ngokuThembela kukaMariya kwaye YAMADODA NOMATSHI: Indlela Amadoda amathandathu awaphumelele ngayo uMlo oBalaseleyo woBomi bawo.
Kutheni uPedro Regis?
Umbono weNenekazi lethu le-Anguera
Ngemiyalezo engama-4921 ekuthiwa yafunyanwa nguPedro Regis ukusukela ngo-1987, umzimba wezinto ezinxulumene nokuhlanjwa okungcolileyo kweLady Yethu yaseAnguera eBrazil kubaluleke kakhulu. Imtsalane ingqalelo yababhali abaziingcali ezifana nentatheli eyaziwayo yase-Italiyane uSaverio Gaeta, kwaye kutsha nje sele ingumxholo wophononongo lobude beencwadi ngumphandi uAnnita Magri.
Ekuboneni kokuqala, imiyalezo inokubonakala iphindaphindeka (isityholo sikwenziwa rhoqo kwabo baseMedjugorje) ngokubhekisele kugxininiso olungaguquguqukiyo kwimixholo ethile esembindini: isidingo sokunikela ngobomi bakho ngokupheleleyo kuThixo, ukuthembeka kwiNene Magisterium yeCawe, ukubaluleka komthandazo, iZibhalo kunye neMisa. Nangona kunjalo, xa ithathelwa ingqalelo kwisithuba eside, imiyalezo yeAnguera ichukumisa kwizifundo ezahlukeneyo ezinento engahambelaniyo neemfundiso zeCawa okanye izityhilelo zabucala ezivunyiweyo.
Isimo seCawa ngokubhekisele kwii-apula zeAnguera iyaqondakala. njengaseZaro di Ischia, kumiselwe ikhomishini ngeenjongo zovavanyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka kuthiwe isikhundla sikaMsgr. UZanoni, uBhishophu omkhulu we-Feira de Santana, noxanduva lwe-diocesan ye-Anguera, uyandixhasa ngokubanzi, njengoko kunokubonwa kolu dliwanondlebe lufutshane (ngesiPhuthukezi ngezihlokwana zase-Italiya): Cofa apha
Kwaye u-Archbishop Zanoni uvele esidlangalaleni e-Anguera ecaleni kukaPedro Regis, kwaye wasikelela abahambeli.
Kuya kufuneka icace into yokuba umxholo wale miyalezo awunakuba nemvelaphi yeedemon ngenxa yemfundiso engqongqo yezakwalizwi. Kuyinyani ukuba uFrancois-Marie Dermine waseCanada onempembelelo utyhola uPedro Regis kumajelo eendaba ase-Itali ngokufumana le miyalezo "ngokubhala ngokuzenzekelayo." Umboni, ngokwakhe, uyiphikisile le hypothesis ngokuthe ngqo nangokuqinisekileyo (Cofa apha). Ukujonga ukwabelana noPedro ngemiyalezo ayifumeneyo, Cofa apha.
Xa kuhlolisiswa izimvo zikaFr. Ulusu malunga nombuzo oqhelekileyo wesityhilelo sangasese sangoku, kuyakhawuleza ukubonakala ukuba unezakwalizwi kuqala ngokuchasene nasiphi na isiprofeto (njengemibhalo ka-Fr. Stefano Gobbi) kwaye uthathela ingqalelo ukuza kweXesha loXolo umbono wobuxoki. Ngokubhekisele kwinto yokuba uPedro Regis wayenokuyila malunga nemiyalezo engama-5000 kwisithuba seminyaka engama-33, kuya kufuneka abuzwe ukuba yeyiphi inkuthazo anokuba nayo yokwenza oko. Ngokukodwa, uPedro Regis wayenokucinga njani ngomyalezo obanzi # 458, owawufumana esidlangalaleni xa wayeguqe phantse iiyure ezimbini nge-2 kaNovemba 1991? Kwaye wayenokuyibhala njani ngaphezulu kwamaphepha ayi-130 abhalwe kwangaphambili, umyalezo umi ngokugqibeleleyo kwiphepha le-130? UPedro Regis, naye ngokwakhe, wayengazi ngentsingiselo yamanye amagama ezenkolo asetyenziswa kulo myalezo. Kuqikelelwa ukuba ngamangqina ayi-8000 abekhona, kubandakanya iintatheli ze-TV, kuba i-Lady of Anguera ithembise kusuku olungaphambili ukuba inike "umqondiso" kubantu abathandabuzayo.
Kutheni uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta?
Abo bangevanga nentsingiselo ifanelekileyo yesityhilelo kwisipho esithi "Ukuphila Ngokuthanda KukaThixo," uYesu awaphathisa uLuisa ngamanye amaxesha bayakhathazwa yinzondelelo efunyanwa ngabo banentshayelelo: Ngaba lo mfazi u-Itali wasweleka waye wabhubha kwiminyaka engama-70 eyadlulayo?
Nangona ungasifumana isingeniso ezincwadini, Isithsaba seMbali, Isithsaba sobungcwele, Ilanga lentando yam (Ipapashwe yiVatican ngokwayo), Isikhokelo kwiNcwadi yezulu (ephethe i-imprimatur), isishwankathelo esifutshane sikaMark Mallett NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe, imisebenzi kaFr. UJoseph Iannuzzi, kunye neminye imithombo, nceda usivumele, kwizivakalisi ezimbalwa, ukuba sizame ukuphelisa ukungathandeki.
U-Luisa wazalwa nge-23 ka-Epreli ka-1865 (ngeCawe eyathi kamva yabhengezwa ngu-St. Wayengomnye weentombi ezintlanu ezazihlala kwidolophana yaseCorato, e-Itali.
Ukususela kwiminyaka yakhe yokuqala, uLuisa wayekhathazwa ngumtyholi owabonakala kuye ngamaphupha ayoyikisayo. Ngenxa yoko, wachitha ixesha elide ethandaza iRosari ecela ukukhuselwa zabangcwele. Kuxa waye waba “yintombi kaMariya” awathi amaphupha amabi ekugqibeleni aphela eneminyaka elishumi elinanye. Kunyaka olandelayo, uYesu waqala ukuthetha ngaphakathi kuye ngakumbi emva kokufumana uMthendeleko oNgcwele. Xa wayeneminyaka elishumi elinesithathu, wabonakala kuye embonweni awangqina kuwo kwi-balcony yasekhaya. Apho, kwisitalato esingezantsi, wabona isihlwele namajoni axhobileyo ekhokela amabanjwa amathathu; waqonda ukuba uYesu ungomnye wabo. Akufika phantsi kwebhalkhoni, waphakamisa intloko wakhwaza: “Mphefumlo, ndincede! ” Echukumiseke ngokunzulu, uLuisa wazinikezela ukusukela ngaloo mini ukuya njengomphefumlo wexhoba ukuze kuhlawulwe izono zoluntu.
Malunga neminyaka elishumi elinesine, uLuisa waqala ukuba nemibono kunye nokubonakala kukaYesu noMariya kunye nokubandezeleka ngokwasemzimbeni. Ngasihlandlo sithile, uYesu wabeka isithsaba sameva entlokweni yakhe simenza ukuba angabikho zingqondweni kunye nokutya iintsuku ezimbini okanye ezintathu. Oko kwaba yinto eyimfihlakalo apho uLuisa aqala khona ukuhlala kuMthendeleko yedwa "njengesonka semihla ngemihla." Nanini na xa wayenyanzelwa ukuba atye, wayengaze akwazi ukwetyisa ukutya, okwaphuma emva kwemizuzu, eqinile kwaye emitsha, ngokungathi khange kutyiwe.
Ngenxa yeentloni zakhe phambi kosapho lwakhe, ababengaluqondi unobangela wokubandezeleka kwakhe, uLuisa wacela iNkosi ukuba ifihle ezi zilingo kwabanye. UYesu wamnika kwangoko isicelo sakhe ngokuvumela ukuba umzimba wakhe uthathe ukunganyakazi, imeko engqwabalala efana nokubonakala ngathi ufile. Kuphela kuxa umfundisi wenza uphawu loMnqamlezo emzimbeni wakhe apho uLuisa wabuya wafumana amandla akhe. Le meko imangalisayo yaqhubeka de kwasekufeni kwakhe ngo-1947 — kwaza kwalandelwa umngcwabo owawungeyondlwan 'iyanetha. Ngeli xesha ebomini bakhe, akazange abe nasifo sokugula (de wahlaselwa yinyumoniya ekugqibeleni) kwaye akazange afumane izilonda zokulala, nangona wayevalelwe ebhedini yakhe encinci iminyaka engamashumi amathandathu anesine.
Kanye njengokuba isityhilelo esimangalisayo seNceba kaThixo iphethwe nguYesu kwi-St Faustina Umzamo kaThixo wokugqibela wosindiso (ngaphambi kokuBuya kwakhe kwesiBini ngobabalo), Kwangokunjalo nezambulo zakhe kwiNtando kaThixo zanikwa uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta Umzamo kaThixo wokugqibela wokungcwaliswa. Usindiso kunye nokungcwaliswa: eyona minqweno mibini iphambili anayo uThixo ngabantwana Bakhe abathandekayo. Esokuqala sisiseko sokugqibela; ke, kufanelekile ukuba izityhilelo zikaFaustina zaziwe ngokubanzi kuqala; kodwa, ekugqibeleni, uThixo akanqweneli nje ukuba samkele inceba Yakhe, kodwa samkele obakhe ubomi njengobomi bethu kwaye ke size sifanane Naye-kangangoko esinakho isidalwa. Ngelixa utyhilelo kaFaustina, bona ngokwabo, bahlala bebhekisa kolu lungelelaniso lutsha lokuphila kwiNtando yezulu (njengoko kutyhilwa kwezinye iimfihlakalo ezininzi ezivunyiweyo ngokupheleleyo ze-20).th Ngenkulungwane yokuqala, ishiywe eLuisa ukuba ibe ngumabhalisi wokuqala kunye "nonobhala" wale "ubungcwele obutsha nobungcwele" (njengoko uPope St John Paul II bayibizayo).
Ngelixa izityhilelo zikaLuisa zingokwenyani ngokupheleleyo (iBandla likuqinisekisile oku kwaye kaninzi sele livumile), banike oko kukuthi, ngokungathandabuzekiyo, owona myalezo umangalisayo umntu unokucinga. Umyalezo wabo umangalisa ingqondo kangangokuba ukuthandabuza kubo kuya kulinga, kodwa ngenxa yento nje elula Akukho sizathu sivakalayo sihleli ngenxa yokuthandabuza. Kwaye umyalezo ngulo: emva kweminyaka engama-4,000 yokulungiselela ngaphakathi kwembali yosindiso kunye nama-2,000 eminyaka yokulungiselela okuqhushumayo kwimbali yeCawa, iCawe ekugqibeleni ilungele ukufumana isithsaba sayo; ukulungele ukufumana oko uMoya oyiNgcwele ebemalathise kuye ngalo lonke ixesha. Ayikho enye ngaphandle kobungcwele be-Edene ngokwayo-ubungcwele obo uMariya, nabo, babunandipha ngendlela egqibeleleyo ngakumbi kunoAdam noEva—kwaye ngoku iyafumaneka ukulungiselela. Obu bungcwele babizwa ngokuba "Ukuphila ngokuthanda kukaThixo." Luhlobo lobabalo. Kukuqonda komthandazo othi "Bawo wethu" emphefumlweni, ukuba intando kaThixo yenziwe kuwe njengoko yenziwa ngabangcwele abaseZulwini. Ayithathi indawo yoluphi na uhlobo lonqulo kunye nezenzo ebesizicelile izulu-lezulu-ukubuza iiSakramente, ukuthandaza iRosary, ukuzila ukutya, ukufunda iZibhalo, ukuzahlulela kuMariya, ukwenza imisebenzi yenceba, njalo-njalo, kuyenza ezi zinto. Imemelela ngokungxamisekileyo nangaphezulu, kuba ngoku singazenza zonke ezi zinto ngendlela eyahlulwe ngokwenene.
Kodwa uYesu uxelele uLuisa ukuba akonelisi yimiphefumlo embalwa apha kwaye kuphila ubomi obutsha. Uza kuzisa ulawulo lwayo kwihlabathi liphela kwi-Era Elidumileyo yoXolo lweLizwe eliNgcwele. Kungoko kuphela apho umthandazo "uBawo wethu" uza kuzalisekiswa ngokwenene; kwaye lo mthandazo, owona mthandazo mkhulu wakha wathandazwa, sisiprofetho esiqinisekileyo esithethwe yimilebe yoNyana kaThixo. Uza kuza uBukumkani bakhe. Akukho nto kwaye akukho mntu unokuyiyeka. Kodwa, ngo-Luisa, uYesu ucenga sonke ukuba sibe ngabo sokwazisa uBukumkani; ukufunda okungakumbi malunga nentando kaThixo (njengoko etyhile kuLunisa lwayo); ukuba siphile ngokuthanda kwakhe ngokwesiqhelo kwaye silungiselele umhlaba ukuba ungalawulwa; ukumnika ukuthanda kwethu ukuze asinike ezakhe.
“Yesu, ndiyathemba kuwe. Intando yakho mayenziwe. Ndikunika ukuthanda kwam; Ndicela undinike eyakho. ”
“Mabufike uBukumkani bakho. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengasezulwini.
La ngamazwi athi uYesu asicele ukuba sihlale sihleli ezingqondweni zethu, entliziyweni, nakwimilebe yethu.
Ibali likaValeria likaCopponi lokufumana indawo evela ezulwini laqala xa wayeseLourdes ehamba nendoda yakhe yasemkhosini kuhambo. Apho weva ilizwi awalichaza njengengelosi yakhe, emxelela ukuba aphakame. Emveni koko wammisa kwiNkosazana Yethu, eyathi, "Uya kuba sisithsaba sam" -igama awaliqondayo kwiminyaka kamva xa umfundisi wayisebenzisa kwimeko yeqela lomthandazo awaliqala kwisixeko sasekhaya eRoma, e-Itali. Ezi ntlanganiso, apho uValeria ahambisa imiyalezo yakhe, yayiqala ukubanjwa kabini ngenyanga ngooLwezithathu, emva koko veki zonke ngokwesicelo sikaYesu, athi yena bonayo kwicawa yase-Sant'Ignazio ngokunxulumene nentlanganiso ne-American Jesuit, uFr. URobert Faricy. Ubizo lukaValeria luqinisekiswe kukuphiliswa okungaphaya kwendalo, kubandakanya nesifo sokuqina kwamathambo, esabandakanya amanzi angummangaliso eCollevalenza, 'i-Italian Lourdes' kunye nekhaya loonongendi baseSpain, uMama Speranza di Gesù (1893-1983), okwangoku intsingiselo.
Kwakungo Fr. UGabriele Amorth okhuthaze uValeria ukuba asasaze imiyalezo yakhe ngaphandle komthandazo. Isimo sengqondo sabefundisi sixutywe kwangaphambili: abanye abefundisi bayathandabuza, ngelixa abanye bethatha inxaxheba ngokupheleleyo kwi-cenacle.
The okulandelayo Isuka kumagama kaValeria Copponi, njengoko zichaziwe kwiwebhusayithi yakhe kwaye iguqulelwa kwisiTaliyane: http://gesu-maria.net/. Enye inguqulelo yesiNgesi inokufumaneka kwindawo yakhe yesiNgesi apha: http://keepwatchwithme.org/?p=22
“Ndiyisixhobo esisetyenziswa nguYesu ukusenza ukuba silive ixesha lakhe. Ngelixa ndingakulungelanga oku, ndiyamkela ndinoloyiko olukhulu kwaye ndinoxanduva ngesi sipho sikhulu, ndizinikela ngokupheleleyo kwintando yakhe. Obu bunkcenkce obungathethekiyo babizwa ngokuba "ziindawo." Oku kubandakanya amagama angaphakathi angaveli kwingqondo ekwimo yeengcinga, kodwa avela entliziyweni, ngokungathi lilizwi lithetha ngaphakathi.
Xa ndiqala ukubhala (masithi, phantsi kwenkcaza), andiziboni izimvo zonke. Ekupheleni, xa ndifunda kwakhona, ndiyayiqonda intsingiselo yamagama onke athi "uxelwe" kum okanye ngokungaphaya ngokukhawuleza kulwimi lwezakwalizwi endingaluqondiyo. Ekuqaleni, into apho mangalisiwe ubukhulu becala olu yayilubhalo “olucocekileyo” ngaphandle kokucinywa okanye ulungiso, olugqibeleleyo ngakumbi ngakumbi kunesibizo esiqhelekileyo, ngaphandle kokudinwa kwam; Zonke ziphuma kakuhle. Siyazi ke ukuba umoya uvuthuza apho uthanda khona, nini, kwaye ngokuzithoba okukhulu, sivuma ukuba ngaphandle kwakhe asinakwenza nto, sizinikela ekuphulaphuleni uLizwi, ngubani na oyindlela, nenyaniso, noBomi.